स्वागत छ तपाइंलाई मेरो ब्लगरमा...
नेपाल भ्रमणवर्ष २०२० मा नुवाकोट को रमणीय इस्थानको अबलोकन गरौ
प्रस्तुतकर्ता prakash.shoshit No comments:
के हो मार्शल, कसरी लगाइन्छ ?
संविधानसभामा मयार्दापालकका रुपमा प्रहरी खटाइएका हुन्छन् । उनिहरुले दौरा सुरुवाल लगाएर संविधानसभा चलिरहँदा मर्यादापालकको काम गरिरहेका हामीले संविधानसभामा देख्न सक्छौं ।
संविधानसभा संचालनमा वाधा आउने गरी कुनैपनि अवान्छित कृयाकलाप गरिएमा सभामुखले मार्शल लगाएर संविधानसभा सदस्यलाइ नियन्त्रणमा लिन आदेश दिन सक्छन् । सभामुखको आदेश नै सादा पोशाकमा खटिएका ति प्रहरीलाई अन्तिम आदशे हुने कानुन छ ।
यदी संविधान जारी गर्ने सत्तापक्षको तयारी पुरा भए आफ्नो पक्षमा दुइ तिहाइ हुने आँकलन गरेको छ । पहिचानपक्षधरहरु अल्पमतमा हुने र उनिहरुले संविधान जारी हुने अवस्थामा नारा,धर्ना वा रोष्टम घेराउ गरेमा मार्शल लगाउन सक्ने सभामुखको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
गुगलले ल्यायो नयाँ सुविधा, अब जिमेलबाट पैसा पठाउन सकिने
जिमेल चलाउनु हुन्छ भने तपाईको लागि खुशीको कुरा छ । जिमेल प्रयोगकर्ताले अब एउटा इमेलको आधारमा पैसा पठाउन सक्ने भएका छन । गुगलले यो सुविधा गुगल वालेटको माध्यमबाट ल्याएको हो ।
यो सुविधाबाट फाइदा लिनको लागि भने तपाईको उमेर १८ वर्ष पुगेको हुनु पर्ने र आफ्नै जिमेल एकाउण्ट हुनुपर्ने हुन्छ । जसबाट तपाईले आफ्नो साथी र परिवारलाई इमेलको माध्यमबाट पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ ।
पैसा पठाउने यो सुविधा चाहि डेस्कटप ब्राउजरको प्रयोग गरेर मात्र गर्न सकिनेछ । यसमा पैसा पठाउनेको साथै पैसा पाउने व्यक्तिको पनि इमेल एकाउण्ट हुनु जरुरी हुन्छ । अनि मात्र यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ । तर पाउने व्यक्तिको भने जिमेल एकाउण्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
बुद्धको शान्त अनुहारमा पनि
चिन्ताको रेखा भेट्छु म ।
शान्ति प्रेमी नेपालीको
आज किन यस्तो हाल भो ?
बुद्ध जन्मेको नेपालमा
बुद्धिको किन अनिकाल भो ?
पहरा गर्ने स्वयम्भुको तिनै नेत्र
कहीं बन्दै त भएनन ?
रक्षा गर्ने पशुपतिले शक्ति बोकी
कहि अन्तै त गएनन ?
स्वयम्भुको मौन आँखामा पनि
विवशताको आँशु देख्छु म ।
विशाल हिमालको छातीमा
आजभोलि बिजुली चम्किन्छरे ।
संधै शान्त हुने ती गाउँ बेसिमा
पनि चट्टान थर्किन्छरे ।
मन उदाँश छ,सोच्दै छु
कहीं शाहीदको बलिदान
त्यसै खेर जाने त हैन ?
लुटेरा हरु तयार छन बस्ती लुट्न
सतर्क हुनुहोस :स्मार्ट फोनबाट
खिचिएको नग्न फोटो कहिले डिलिट
स्मार्ट फोनबाट खिचिएको कुनै पनि गोप्य अंगको फोटो डिलिट
हुदैन |यस्तो फोटो नखिच्नका लागि बिशेषज्ञहरुले आग्रह
गरेका छन् । उनीहरुले भने अनुसार तपाइँले चलाउने जुनसुकै
स्मार्टफोनबाट फोटो खिच्दा सचेत रहनुहोस् किनकि उक्त
फोटो तपाइँले डीलेट गरे पनि डिलीट हुँदैन ।
तत्कालको लागि डिलिट भएको भएपनि त्यो कुनै
ठाउमा सुरक्षित भएर बसेको हुन्छ |
एन्ड्रोइडको सुरक्षा माथि रिसर्च गर्ने विशेषज्ञहरुले
यस्तो चेतावनी दिएका छन् कि कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनबाट
नाङ्गो फोटो नाखिच्नुहोस किनकि उक्त फोटो डीलीट
गरेपछि पनि त्यो फोटो डिलीट हुँदैन । विशेषज्ञहरुले
यसको प्रमाणका लागि कतिपय डीलेट भैसकेका फोटोहरु
सार्वजनिक गरि उक्त कुरालाई प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
उनीहरुको अनुसार एन्ड्रोइड फेक्ट्री रीसेट गर्नेवाला फंक्शनले
फोटोको कुनैपनि डाटालाई पुरा डिलीट गर्न सक्दैन ।
बिशेषज्ञले देखाइदिए डिलेट भैसकेका ४०,००० नग्न फोटो ..!
पुराना मोबाइल बेच्ने ठाउँबाट किनिएका २०
ओटा पुराना मोबाइलबाट
यस्तो डाटा फेरी पाइयो कि जसमा ४० हजार
भन्दा बढी पहिलेनै डिलिट गरिएका फोटो प्राप्त भयो ।
जसमा २ सय ५० ओटा फोटोमा उक्त
फोनको पुरानो प्रयोगकर्ताले आफ्नो गोप्य
अंगको फोटो खिचेका थिए । जसमा २० जना मध्ये ४
जना मालिकको पहिचान समेत भएको थियो ।
स्मार्ट फोनमा फोटो डिलेट गर्दा फोटो हैन, मात्र
डायरेक्टरी डिलीट हुन्छ ?
सफ्टवेयर सुरक्षाको लागि काम गर्ने कंपनी अवास्तका अनुसार
स्मार्टफोनमा रहेको कुनै पनि फोटोको डाटालाई पूरा डिलीट
गर्नको लागि जुन फैक्टरी रीसेट अप्शन प्रयोग हुन्छ,
त्यसमा डाटाको लोकेशन बताउने डायरेक्टरी मात्र डिलेट हुन्छ
तर मुख्य फोटो तथा उक्त फोटोको डाटा भने डिलीट हुँदैन
त्यसैले उक्त फोटो पछी सम्म सुरक्षित भएर बस्छ ।
त्यसैले सकेसम्म आफ्नो गोप्य फोटोहरु स्मार्टफोनबाट
नखिचेकै राम्रो किनकि कतिपय एप्स बनाउने कम्पनहरुले
त्यस्ता डाटाहरु इन्टरनेट मार्फत तानेर तपाइँको फोटोलाई
भाइरल बनाइ बदनाम पनि बनाउन सक्छ्न् ।
पुस महिना । काठमाडौँ जाडोमा पहारिलो घाम तापेर बस्नु पनि आनन्दै हुन्छ । दिउँसोको १ बजेको छ । यत्तिकैमा बाहिर गाडीको हर्न बज्न थाल्छ । बा १ ज ४८७७ नं. को मारुती जिप लिएर कुशल चालक गोविन्दप्रसाद रिमाल आइसकेका छन् साथमा सहयात्री शाखा अधिकृत हरिहर पौडेल र ना.सु. तेजप्रसाद पौडेललाई लिएर । दिन हो २०६३ सालको पुस २० गते ।
नेपालको इतिहास जान्न/बुझ्न खोज्ने जोसुकैले पनि जीवनमा एक पटक नुवाकोट जिल्ला टेक्नु उपयुक्त हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण अभियानको थालनी यसै जिल्लाबाट गरेका हुन् । यति महत्त्वपूर्ण जिल्ला घुम्ने मेरो धेरै दिनको अभिलाषा थियो । राजधानी नजिकै भएर पनि अनुकूल मिलेको थिएन । आज भने त्यो संयोग जुट्न पुगेको देखेर म प्रफुल्ल छु ।
काठमाडौँ कोटेश्वरबाट सुरु भएको यात्रा चक्रपथ हुँदै बालाजु उद्यान र बजारलाई बायाँ पारेर अघि बढ्छ । नागार्जुन वनको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्छौं । उत्तिसका बाक्ला रुख र वरपरको हरियालीले हामीलाई स्वागत गरिरहेझैँ लाग्छ । हिउँद महिना पतझडको मौसममा पनि उत्तिसले आफ्नो बैँस धानेर बसेको रहेछ । ठूलाठूला रुखका हाँगामा उत्तिसका छिद्रा पात यथावत् देखिन्छन् । विस्तारै उकालो सुरु हुन्छ । तल बेँसीमा देखिने गोलढुङ्गा गाविसका बाक्ला घरले उपत्यकाभित्रको जनघनत्व बढ्दै गैरहेको प्रमाणित गर्दछन् । यत्तिकैमा मुड्खु भञ्ज्याङ आउँछ । खास उपत्यका सकिए पनि काठमाडौँ जिल्ला सकिएको छैन तर उपत्यकाभित्रको कोलाहल, धूलो, धूँवा र दुर्गन्धबाट हामी पर पुगिसकेका छौँ । यहाँको वातावरण शान्त र रमाइलो छ । हरिया बोटविरुवा, रुख पातले भरिपूर्ण हुनाको साथै बाटाको दायाँबायाँ खेतहरूमा गहुँ उम्रिएर हरियै भएको देख्न पाइन्छ । ओशो तपोवन र ठाउँठाउँमा खुलेको रिसोर्ट र होटलहरूले ठूलाठूला क्षेत्र ओगटेका छन् । राजधानी नजिकै यस्तो खुल्ला र चौडा क्षेत्र पाउनु साँच्चै नै प्राकृतिक बरदान नै मान्नुपर्छ । बिदाका दिनमा राजधानीबाट विद्यार्थी र कर्मचारी सिङ्गै बस रिजर्भ गरी पिकनिक मनाउन यतै आइपुग्छन् ।
यत्तिकैमा तीनपिपले आउँछ जहाँबाट ओखरपौवाको सिसडोल जाने बाटो फाट्छ । यो उही ओखरपौवाको सिसडोल हो जो बेलाबेलामा निक्कै चर्चामा आउने गर्दछ । राजधानीको फोहोरमैला फाल्ने भनी व्यवस्था गरिएको यो ठाउँ मूलबाटोबाट डेढ किलोमिटर तल खाँेचमा पर्दछ । डम्पिङ साइड नजिक वरपरका गाउँले र बासिन्दाले कहिले स्वास्थ्य चौकी, कहिले स्कुल, कहिले घरैपिच्छे रोजगारीजस्ता माग राखेर अवरोध खडा गरी बेलाबेलामा आन्दोलन, चक्का जाम गरिदिनाले राजधानीको फोहोर कैयौँ दिन उठ्न नपाई बाटोघाटो र यत्रतत्र दुर्गन्धित भई नाक छोपेर हिँड्डुल गर्नु परेको सर्वविदितै छ । हुन पनि यस्ता अवरोध गर्ने समूह बेलाबेलामा एक छाडी एक निस्किरहन्छन् । एकको माग पूरा गर्न नपाउँदै अर्को समूह निस्किहाल्छ । यतिबेला भने त्यस्तो अवरोध केही नहुँदा फोहोरमैलाका गाडी निर्वाध हिँडेको हामी माथिल्लो बाटो हिँड्दा सजिलै देखिरहेका छौँ । तीनपिपलेपछि जीतपुर फेदी आउँछ । त्यसपछि पाँचमाने हुँदै अघि बढ्दै जाँदा ठूलो खोला भन्ने ठाउँ आउँछ । पानी बिनाको खोल्सोजस्तो परेको यो ठाउँले काठमाडौँ र नुवाकोट जिल्लालाई छुट्याउँछ । बाटैछेउ एउटा ठूलो ढुङ्गो देखिन्छ जसमाथि कतयलभ उबबिअभ नामको एउटा सिङ्गै रिसोर्ट खडा गरिएको देख्न पाइन्छ ।
अब हामी ककनी बजारमा प्रवेश गर्छौं । काठमाडौँबाट नुवाकोट लाग्दा यो पहिलो नाका र बजार हो । बजार भने ठूलो छैन । समुद्रको सतहदेखि ५,००० फिटमाथि रहेको यो ठाउँ काठमाडौँबाट २० कि.मि. मात्र उत्तर पश्चिममा पर्दछ । यहाँबाट देखिने हिमालहरू मनासलु, गणेश, जुगल, लाम्टाङ र गौरीशङ्कर हुन् । यो हिमाली दृश्य हेर्न पनि पर्यटक यहाँ आउँछन् । उत्तरायण फर्केको भञ्ज्याङजस्तो हरियालीयुक्त पाखामा सानो चिटिक्क परेको बाटाको दुवैतिर घर पसल भएको रमणीय ठाउँ हो ककनी बजार । बाटोको सुरुमै प्रहरी चौकीको जीर्ण र भग्न भवन देख्न पाइन्छ जो द्वन्द्वकालमा बम विस्फोट गरी क्षतिग्रस्त बनाइएको थियो । त्यसबेलादेखि नै यहाँ प्रहरी बस्दैनन् । अहिले प्रहरीहरू यहाँबाट आधा कोस टाढा पूर्व रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयमा बस्छन् । अहिले यहाँ फेरि प्रहरी चौकीको माग भैरहेछ । यो चौकीको स्थापनार्थ ठूलै रकम खर्च गरेर पुरानो भवन पुनः निर्माण गर्नु पर्दछ । आधा कोस पूर्व केही समथर र उत्तर/दक्षिण फर्केको डाँडा-पाखामा अवस्थित ककनीको शिरमा नेपाल टेलिकमको टावरको सुरक्षार्थ बसेको सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरीको अतिरिक्त महाविद्यालय, सेनाको एक टुकडी आदि सरकारी निकाय छन् । नजिकै रहेको ककनी कृषि फार्ममा उत्पादन हुने आरु, नास्पाती, स्याउ, आलु, मूलाले काठमाडौँ उपत्यकामा राम्रो बजार पाएको सर्वविदितै छ ।
ककनी बजार सकिनासाथ ट्राउट भिलेज आउँछ जहाँ ट्राउट माछा पाल्ने पोखरीहरू बाटाको तलमाथि देख्न पाइन्छ । कतै सामूहिकरूपमा र कतै घरघरै उत्पादन गरिने शरीरमा काँडा नहुने ट्राउट माछापालन व्यवसाय सुरुमा जापानी गैरसरकारी संस्थाले सिकाएको हो । अत्यन्तै स्वादिलो मानिने यो माछा काठमाडौँका ठूलाठूला होटलहरूमा अत्यन्त महँगोमा बिक्री हुन्छ र विदेशीको भोजनमा राम्रो परिकार बन्छ । चीसो र बग्ने पानीमा मात्र हुन सक्ने यो माछा अनुकूल वातावरणले गर्दा पनि यहाँ यसको व्यवसाय फस्टाएको मानिन्छ ।
ट्राउट भिलेजपछि यात्रा अघि बढ्दै जाँदा ३५ किलोमिटर भन्ने ठाउँ आउँछ । यसको पुरानो नाम जिरेथुम हो । काठमाडौँ-त्रिशूली सडकमार्ग बनेपछि भने यसको नाम ३५ कि.मि. रहन गयो । शायद राजमार्ग सुरु हुने काठमाडौँको बालाजुदेखि यहाँ ३५ कि.मि. हुनाले सुरुमा यसअनुसार नामाकरण हुन गएको हुनुपर्छ । यहाँ पनि सानोसानो बजार र चिया पसल छन् । यो क्षेत्रमा स्ट्रबेरी (भुइँमा फल्ने एक प्रकारको ऐंसेलु) गोभी, काउली र मूलाको उत्पादन निकै हुँदोरहेछ । यो स्ट्रबेरी पनि जापानी संस्थाले नै सुरुमा सिकाएको भन्दा रहेछन् । यहाँदेखि चार कि.मि. टाढा पर्ने रानीपौवासम्म नै मूलाको प्रशस्त खेती हुन्छ र काठमाडौँ निकासी हुन्छ । काठमाडौँको तरकारी बजारमा रानीपौवाको मूला भनी यसले प्रसिद्धि कमाएको छ ।
अब हामी बेलकोट गाविसको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छौं । यो पनि एउटा ऐतिहासिक स्थल हो । यो जिल्लाभरि यस्ता कोट नौ वटा छन् ती हुन्- नुवाकोट, बेलकोट, कालिकाकोट, भैरबकोट, माताकोट, धुवाकोट, फासकोट, सिमलकोट, सल्यानकोट । नौ वटा कोट हुनाले यो जिल्लाको नाम नुवाकोट रहेको मानिन्छ । बाइसे चौबीसे राज्यको बेलामा आफ्नो राज्यको सीमा-सुरक्षाको निमित्त यस्ता कोट सुरक्षा र सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिन्थे । खासगरी आफ्नो राज्यको प्रशासनिक इलाकाको बीचमा अग्लो स्थान (थुम्को) वा टाकुरामा यस्ता कोट निर्माण गरिएका हुन्थे जहाँ शक्ति स्वरूपा भगवतीको मन्दिर पनि स्थापना गरी नित्यपूजाको साथै वडादसैँको महाष्टमी वा अरू त्यस्तै पर्वमा प्रशस्त बलिसमेत दिइन्थ्यो । स्थानीयस्तरमा भने त्यो चलन अझ पनि कायमै छ । हाल नुवाकोट, रसुवालगायतको क्षेत्र उसबेला काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लको अधीनमा थियो । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखाली फौजले पहिलो विजय नुवाकोटमाथि पाएको थियो भने दोस्रो विजय यही बेलकोटमाथि पाएको थियो । त्यसबेला काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लका प्रतिनिधि जयन्त रानाले यहाँको तैनाथी समालेका थिए । उसबेला कोट रहेको ठाउँ (थुम) मा अहिले सशस्त्र सेनाको एउटा बेसक्याम्प छ । अगाडि, बढ्दै जाँदा मदनपुर गाविस सुरु हुनासाथ हरिया रुखपातसहितको जङ्गलको बीचमा दक्षिणबाट उत्तर फर्केर झर्दै गरेको सानोसानो झरना बाटैमा देख्न पाइन्छ । वषर्ात्मा भने यसले ठूलै रूपधारण गर्दोरहेछ ।
अब बेतिनीको सामुदायिक जङ्गल र त्यसपछि अमारे गाउँ र गाउँपछि 'ज्ञानलाल नर्सरी' आउँछ । नर्सरीपछि खानीखोला भन्ने ठाउँ पुग्दा 'हो यहीनेर सांसद प्रेमसिंह धामीको दुर्घटनामा मृत्यु भएको' भनी बाटो मुनितिर देखाउँदै चालक रिमाल भन्छन् । २०५४ साल भदौ २७ गते शुक्रबारको दिन दार्चुलाका सांसद प्रेमसिंह धामी, नुवाकोट जिल्लाका प्र.जि.अ. बद्रीप्रसाद फुयाल लगायत छ जनाको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । सो दुर्घटनामा भूमिसुधार अधिकारी र ड्राइभरकी छोरी भने घाइते भएर पनि बाँचेका हुन् । पार्टीको कार्यक्रममा नुवाकोट, रसुवाको सिमानामा पर्ने बेत्रावतीबाट फर्कनेक्रममा यो दुखद् दुर्घटना भएको थियो । हामी एकछिन जिप रोकेर दुर्घटनास्थल हेर्छौं । बाटो त्यस्तो नराम्रो र असजिलो त छैन । सुगम बाटो, पिचसडक राम्रै छ तर के भन्नु ! दुर्घटना सजिलै ठाउँमा पनि हु्ँदोरहेछ । बाटो छेउबाट जिप करिब २०० फिट तल खसेको थियो रे । यति कुरा थाहा पाएपछि स्वर्गीय आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै हामी अघि बढ्छौँ ।
अब पाखुरेको टिगाउँ आउँछ । गाउँले बस्तीमा पिच बाटोमै विस्कुन सुकाउने चलन यत्रतत्र छँदैछ । केही दिनअघि मात्र यही गाउँमा एउटा घरअगाडि पिच बाटोमा कोदोको विस्कुन सुकाएको ठाउँमा एउटा ट्रक लर्केर दुर्घटना हुँदा ड्राइभर मरेको कुरा उनै चालकबाट थाहा पाएर हामी आपसमा कुरा गर्छौं "हैन हामीले बनाएको पिच सडक सवारी साधन गुडाउन हो या बाटोमा विस्कुन सुकाउन ?" पिच बाटोलाई आँगनको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने चेतना हामीकहाँ कहिले आउने हो थाहा छैन । कहिले यस्तै सडकमा आँगन सरह केटाकेटी खेलिरहँदा दुखद घटना घटेको र मृत्युसम्म भएको पनि देखे, जानेकै कुरा हो । ओरालो र घुम्ती पार गर्दै हामी तादी खोलाको किनारमा पुग्छौँ । रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड नजिक सूर्यकुण्डबाट निस्केर आउने तादी खोला यहाँ आइपुग्दा हिउँदमा पनि तर्न नसकिने भइसकेको हुन्छ । यो तादी खोला यहाँबाट एक किलोमिटर पश्चिमतिर गई त्रिशूलीमा मिसिन्छ । यही संगम क्षेत्रमा जालपादेवीको प्रसिद्ध मन्दिर पनि छ । यो संगमस्थल (दोभान) लाई देवीघाट भनिन्छ ।
तादी खोलाको पक्की पुल तरेपछि हामी विदुर नगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्छौं । बगरपछि जताततै रातो माटो देखिने पानी विनाको सुख्खा फाँटको बीचबीचमा बस्ती देखिन्छन् । पीपलटार भन्ने ठाउँ आउँछ । जहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भएको ठाउँ देवीघाट पुग्ने एउटा बाटो फाटेर पश्चिमतिर लाग्छ । हामी भने फाँटको बीचबाटै उत्तरतिर लाग्छौँ । पीपलटारदेखि माझीटार बीचको विशाल समथर र सुख्खा भूमिलाई बट्टारभन्दा रहेछन् । बट्टार फाँटमा घैया, कोदो, मकै, पिँडालु, सखरखण्ड, उखु प्रशस्त हुँदोरहेछ । यो फाँटलाई सिँचाइ गरी हराभरा बनाउने उद्देश्यले २०२६ सालतिर बट्टार सिँचाइ आयोजनाले त्रिशूलीको पानी तानी सिँचाइ गर्ने प्रयास गरेको पनि हो तर बिजुलीको अनियमितता, महसुल बढी, किसानको क्षमता विपरीत हुँदा आयोजना असफल भई बन्द भएको रहेछ । बट्टार बजारको बीचैमा पश्चिमतिर एउटा बाटो फाट्छ । जहाँबाट देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भएको स्थलतिर पुगिन्छ । हामी अझैँ उत्तर लाग्छौँ । विदुर बजार सुरु हुनु अगावै मैथली व्यारेकको सैन्य तालिम केन्द्र आउँछ र तालिम केन्द्र सकिनासाथ विदुर बजार सुरु हुन्छ । झमम्क साँझ पर्दछ । जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद बाँस्तोलाको आतिथ्यमा उहाँको निवासभित्र छिर्छौं ।
भोलिपल्ट हामी आफ्नो सरकारी काममा लाग्छौँ । जिल्ला न्यायाधीश बाँस्तोला, जिल्ला सरकारी वकिल सुदर्शन लामिछाने लगायत अदालतका सम्पूर्ण कर्मचारीबाट हाम्रो स्वागत गरिन्छ । दिनभरि सरकारी कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन, मालपोत, कारागार, वन कार्यालय आदि निरीक्षणको काम सकी बेलुकीपख त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना हेर्न त्रिशूली नदीपारि बजारतर्फ लाग्छौँ ।
त्रिशूली बजार अघिको पुरानो बजार हो । त्रिशूली नदीको दायाँ किनारामा दक्षिणायन फर्केको सानो तर बाक्ला घर, साँगुरो गल्ली भएको उसबेलाको व्यस्त व्यापारिक थलो हो । त्रिशूलीवारि चौडा ठाउँ विदुरमा २०२४ सालमा सदरमुकाम स्थापना भएपछि बजार पनि उतै विस्तार हुन गयो । ठूलाठूला आधुनिक घर र जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालय उतै बने । फलस्वरूप त्रिशूली बजार उपेक्षित र उजाड हुन गयो । यहाँबाट १४ कि.मि. पश्चिममा पर्ने सामरी भञ्ज्याङ (अहिले नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको सिमाना) उहिले निकै चल्तीको बाटो थियो । "काठमाडौँ-पोखरा (पृथ्वी राजमार्ग) नबन्दै काठमाडौँ-पोखरा- गोरखातिरको आवागमन यही त्रिशूली बजार हुँदै सामरी भञ्ज्याङ भएर हुन्थ्यो । त्यसबेला त्रिशूली बजार निकै गुल्जार थियो । बाटा, गल्ली, दोकान जताततै मान्छेको भीड हुन्थ्यो, आजकाल सुनसान छ ।" एकजना आयुर्वेदीय औषधि बेच्दै गरेको पसलेले हामीसँग गुनासो गरे । अझै पनि जिल्लास्तरीय अस्पताल यहीँ छ जसलाई त्रिशूली अस्पताल भन्दछन् ।अब हामी त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनातर्फ लाग्छौँ । त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना २०२४ सालमा भारतीय सहयोगमा उसबेला १४ करोड भा.रु. को लागतमा निर्मित नेपालको पुरानो आयोजनामध्ये एक हो । गोसाइँकुण्डबाट प्रादुर्भाव हुने त्रिशूली नदीको पानी यहाँबाट ५ किलोमिटर जति माथि टुक्चे भैंसे भन्ने ठाउँमा रहेको इन्टेकमा जम्मा गरी नहरबाट ल्याई यहाँको पावरहाउसमा खसाली २४,००० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरिएको रहेछ । यसरी खसालिएको पानी अर्को नहरद्वारा साढेचार किलो मिटर दक्षिण देवीघाट भन्ने ठाउँमा निर्मित अर्को पावर हाउसमा खसाली १४,००० किलोवाट बिजुली निकालिएको रहेछ जसलाई देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भनिन्छ । यो पनि भारत सरकारकै सहयोगमा ७५ करोड रुपियाँको लागतमा २०४१ सालमा निर्माण गरिएको हो । यी दुवै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय ग्रिडप्रणालीमा जम्मा गरी देशभरि प्रसारित गरिन्छ । यसरी दुई-दुईवटा जलविद्युत् आयोजना हुनुबाट पनि यो जिल्लाले देश विकासमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ भन्नु अनुपयुक्त नहोला ।
झमम्क साँझ पर्छ । हामी त्रिशूलीको पुलतरी वारि निवासस्थान विदुरतर्फ फर्कन्र्छाैं । भोलि हामी पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानको क्रममा खडा गरिएको पहिलो राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र नुवाकोट दरबार र देहावसान भएको ठाउँ देवीघाट संगमस्थल हेर्ने सपना देख्दै निद्रादेवीको काखमा लुटपुटिन्छौँ ।
सा‌स्कृतिक व्याख्यामा प्रेम
हिउँदे जाडो अन्त्य हुँदै गर्दा तन्नेरी पुस्ता प्रणय दिवसमा रमाइरहेका छन्। सहरका चोकहरुमा गुलाब, पोस्टकार्ड र भ्यालेन्टाइनको तस्बिर छापिएका टीसर्टको बिक्री बढिरहेको छ। नगरकोट, धुलिखेल, गोदावारी र ककनी छेउछाउका होटलहरु बुकिङ भएका छन्। सुपरमार्केटहरुले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सन्त भ्यालेन्टाइनलाई यति धेरै महत्व दिने नेपाली सहरिया समाजले पूर्वी संस्कृतिका अमर प्रेम प्रसंगलाई भने भुसुक्कै बिर्सेका छन्।
पूर्वी संस्कृतिले मानवीय जीवनका भौतिक र अभौतिक दुवै पक्षलाई समेटेको छ। यसमा निहित विज्ञान बुझे हाम्रो समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, कला र साहित्यले लिनसक्ने कुरा धेरै छन्। प्रेम प्रसंगकै कुरा गर्ने हो भने राधा-कृष्णको प्रेम, भक्तिनी मीराको प्रेम, महादेव-सतीदेवीको प्रेम, राम-सीताको विवाहसँग जोडिएको प्रेम, नल-दमयन्तीको प्रेम प्रसंगहरुलाई लिन सकिन्छ। यीमध्ये राधा-कृष्णको प्रेमलाई अभूतपूर्व विम्ब मानेर कथा सुन्ने प्रचलन राज्यस्तरमा मान्यताप्राप्त छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। वसन्त पञ्चमीमा (माघ शुक्ल पञ्चमी वा सरस्वती पूजा ) पहिले राजाबाट र आजभोलि राष्ट्रपतिबाट गरिने ...वसन्त श्रवण' राधा-कृष्णकै प्रेमकथा हो। जनस्तरमा लोकप्रिय एवं राज्यबाट समेत अनुमोदित राधा-कृष्णको प्रेमकथालाई सन्त भ्यालेन्टाइनको कथासँग तुलना गर्न मिल्दैन।
स्वस्थानीमा वर्णित महादेव-सतिदेवीको प्रेम अनुपम छ। सतिदेवी आफ्ना पिताले पति महादेवको अपमान गरेको सहन नसकी आगोमा हाम फालेर आत्महत्या गर्छिन्। प्रेममा पागल भएर महादेव उनकोे मृत शरीरलाई काँधमा बोकेर एकएक अंग बाँकी रहुञ्जेल भारतवर्षका विभिन्न ठाउँ भौतारिएको कथानक अत्यन्त मार्मिक छ। पतिको अपमान सहन नसकेर पत्नीले आत्महत्या गर्नु प्रेमप्रतिको महान् समर्पण हो। यो सैनिकहरुले विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्त भ्यालेन्टाइनले पाएको मृत्यदण्डभन्दा हजारौँ गुणा शक्तिशाली छ। महादेव हिन्दूहरु र अझ पहाडे जनजातीय संस्कृतिका आद्यपुरुष भएकाले यो प्रेमकथा अत्यन्त लोकप्रिय छ।
विवाह पञ्चमीको सरोकार स्त्री-पुरुषबीचको प्रेम र त्यसपछि वैवाहिक सम्बन्धसँग छ। विवाह पञ्चमी राम र सीताको विवाह भएको दिन हो। यस दिनलाई जानकी विवाह भनेर मनाउने चलन छ। मंसिरको पहिलो सातातिर (मंसिर शुक्ल पञ्चमी) पर्ने हुनाले मौसम परिवर्तन, अर्थतन्त्र र सामाजिक मनोविज्ञानलाई समेत यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपाली समाजमा यसको महत्व बेग्लै छ।
मिथिला क्षेत्रमा जानकी विवाह जुन किसिमले मनाउने गरिएको छ त्यसभित्र नेपाल र भारतको जनस्तरको सम्बन्ध समेत जोडिएको छ। त्यसले नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि प्रस्ट पार्छ। जनकपुरमा विवाह पञ्चमीको दिन भारतको अयोध्याबाट ठाउँठाउँमा विश्राम लिँदै जन्ती आउने प्रचलन अझै पनि छ। विश्राम लिने ठाउँमध्ये बिहारको फुलहराबाट राम र सीताको प्रेम सुरुवात भएको मानिन्छ। अयोध्याबाट आएका लगायत केही स्थानीयहरु रामका पक्षमा र जानकी मन्दिरका महन्थलगायत अरुहरु सीताका पक्षमा लागेर विवाह सम्पन्न गर्छन्। जनकपुरमा धुमधामसँग विवाह हुने त्यो दिन मिथिला क्षेत्रमा स्थानीय बिदासमेत दिइन्छ। त्यो दिन विवाह गर्न साइत हेर्न पर्दैन भन्ने जनमान्यता मिथिला क्षेत्रमा मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली समाजमा छ।
यसरी जानकी विवाहको दिनलाई प्रेम दिवसको रुपमा व्याख्या गर्दा त्यसले नेपाली समाजमा मात्र नभएर भारतीय समाजमा समेत लोकप्रियता पाउने सम्भावना छ। रामायणकालीन समाजको इतिहास पनि जोडिने हुनाले रावणको राजधानी लंकासम्म (हालको श्रीलंका) यसको विस्तार हुन सम्भव छ। अझ तन्किँदै इन्डोनेसियाको बाली प्रान्तलाई समेत यसले प्रभाव पार्न सक्छ। यसरी विवाह पञ्चमीको प्रेम प्रसंगले समग्र भारतवर्षलाई समेट्ने देखिन्छ।
भ्यालेन्टाइन दिवसलाई प्रेम दिवसको स्तरमा व्याख्या गरिन्छ। तर, यसको सुरुवातको पृष्ठभूमि र सामाजिक मनोविज्ञान हेर्दा यो विशुद्ध प्रेमभन्दा पनि ज्यादा स्त्री र पुरुषबीचको यौनजन्य सम्बन्धसँग जोडिएको देखिन्छ। त्यही भएरै होला, ...तिमी मेरो भ्यालेन्टाइन' वा ...ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे' भन्न केटाहरुलाई आफ्नी श्रीमती वा प्रेमिका नै चाहिन्छ। केटीहरु पनि आफ्ना श्रीमान् वा पे्रमीलाईमात्र त्यस्तो भन्न सक्छन्। अरुलाई भन्ने आँट गरिँदैन। यो भ्यालेन्टाइन दिवसको अवधारणाभित्र यौनजन्य प्रेमको मनोविज्ञान नहुँदो हो त जसले जसलाई पनि भन्न सक्नुपर्थ्याे। तर, त्यस्तो पाइँदैन।
यता पूर्वी संस्कृतिमा यस्ता धेरै आख्यानहरु छन् जसले प्रेमलाई यौनभन्दा धेरै माथि उठेर मानवीय तहमा व्याख्या गर्छन्। सरस्वती पूजा त्यस्तो एउटा सन्दर्भ हो। आमाको मुख हेर्ने, बाबुको मुख हेर्ने, गुरुपूर्णिमाजस्ता सन्दर्भहरु धर्मसँग मात्र नजोडिएर मानवीय प्रेम सम्बन्धको पनि व्याख्या गर्छन्। यी समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय र इतिहाससम्बद्ध पनि छन्।
पूर्वी संस्कारमा रहेका यस्ता अनेक प्रेम प्रसंगहरु अलपत्र छन्। यिनको चर्चा गर्नु राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कुनै पनि हिसाबले किन उपयुक्त नठानिएको हो? उता, सैनिकले विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेबापत भ्यालेन्टाइनले मृत्युदण्ड पाएको सामान्य कथालाई सम्झेर पोस्टकार्ड, टीसर्ट र रक्सीको ठूलो व्यापार भइरहेको छ। यो उत्तर साम्राज्यवादको सांस्कृतिक व्यापार हो। खस संस्कृतिको उपनिवेशबाट शोषित भएको महसुस गर्ने नेपालीहरुले यसलाई कसरी हेर्ने? पश्चिमले संस्कृतिलाई उपभोग्य वस्तु बनाएर बेचिरहेछ। हामी उपभोक्ता बनेर किनिरहेछौँ। हामी कृष्ण, राम, जानकी, पृथ्वीनारायणलाई मुर्दावाद भन्दैछौँ। सन्त भ्यालेन्टाइनको जयजयकार गर्दैछौँ।
संस्कृति मानिसका व्यवहारबाट अभिव्यक्त हुने कुरा हो। राज्यको केन्द्रीय तहमा बसेर सांस्कृतिक पहिचानका कुरा गर्नेले स्थानीय तहमा जनताले कस्ता अभ्यासहरु गरिरहेछन् भनेर हेर्नु आवश्यक छ। जतिसुकै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानका राजनीतिक कुरा गरे पनि तन्नेरी पुस्ताले अर्कै बाटो समातिसकेको छ। नयाँ पुस्तालाई हामीले सांस्कृतिक अवसर दिएनौँ भने उनीहरु अवसरको खोजीमा जहाँ पनि पुग्न सक्छन्। जस्तो कि, हामीले हाम्रा संस्कृतिमा भएका यति धेरै प्रेमप्रसंगलाई बहसको रुप नदिँदा उनीहरु फ्रेबुअरी १४ कुरेर प्रेम साटासाट गरिरहेछन्।
मलेसियामा अब पासपोर्ट चेक गर्न एसएमएस सेवा
मलेशीया स्थित नेपाली दुताबासमा पास्पोर्ट नबिकरण गर्न आएका नेपालीले अब आफ्नो पास्पोर्ट आए नआएको जानकारी एसएमएसबाट प्रप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।
मलेसिया स्थित नेपाली दुताबासले जारी गरेको सुचना अनुसार दुताबासले एक मलेसियन कम्पनी सँगको सहकार्यमा यस्तो सेवा ल्याइएको हो ।
सुचना अनुसार पासपर्ट चेक गर्न मोबाइलको म्यासेज बक्समा गइ एनपीपी टाइप गरि एक स्पेस छाडेर आफ्नो पुरानो पास्पोर्ट नम्बर टाइप गरेर ३६६६० मा एसएमएस पठाएर जानकारी लिन सकिने छ ।
२०१५ काे फरवरी महीना यस्ताे महीना हाे जसमा मा ४ अाइतवार ४, साेमवार, ४ मंगलवार, ४ बुधवार, ४ िवहीवार, ४ शुक्रवार बार र ४ शनीवार परेकाे छ । याे ८२३ वर्षमा १ पटक मात्र अाउछ , यस्ताे अवसर लाइ धनकाे पटेली भन्दछन ।
'अदालत उही। सिंहदरबार उही। उही बालुवाटार। उही अनुहार भद्रकालीको,' गाडीभित्र र बाहिर झरेका बोलीको भोलुम क्रमशः बढ्दैथियो, 'सबै रंगका फूल आफूखुसी नफुल्दासम्म गुड्छ गाडी। चल्छ, आँधी। फरक यत्ति हो, कतिखेर थामिएजस्तो लाग्ला।'
३१ वर्षीय रोल्पाली लालधन रोका मगर उर्फ कमरेड हुरी घाइते हुन्। घोराही आक्रमणको बेला टाउकोमा छर्रा लागेर पहिलोपालि घाइते भएका थिए। त्यसपछि दोस्रोचोटिको खारा लडाइँमा दाया खुटामा एट्टीवनको छर्रा लाग्यो। मृत्युको मुखबाट बल्लबल्ल फर्केका उनी त्यस दिनदेखि पाइला फाल्दा ढिकी कुटेजस्तो हुन्छ।
उनका जेठा दाजु बलबहादुरलाई सुरक्षाफौजले स्कुलबाट भारी बोकाएर लगेपछि घर फर्केनन्। सुरक्षाफौजले नै घरमा पनि बनमा पनि बस्न नदिएपछि उनको सपरिवार नै कमरेड भयो। माहिला दाजु किर्सनधन सात पढ्दापढ्दै कमरेड ज्वाला भए र उनी कमरेड हुरी। उनका माहिला दाजु, दिदी र बहिनीले पार्टीमै बिहे गरे। बिहे भएको तीन महिनापछि नै उनले कमरेड जेनीलाई म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमणमा गुमाए। सहिदपति भएको दुई बर्षपछि सहिदपत्नी कमरेड नमूनासित उनले बिहे गरे।
एक दिन त कसो नफर्केला भनी बलबहादुरलाई बाटो हेरेर उनको परिवारले अहिलेसम्म काजकिरिया गरेको छैन। आशैआशमा उनकी आमा दिलपुरा पोहोर हिउँदमा माथि गइन्।
सग्लो जिउका उनका धेरै कमरेड जनयुद्धमा उब्रेको उमेर बोकेर साउदी अरब र मलेसिया उडे। बाँकी कमरेड उनीजस्तै न गरी खाने न मरी जानेकै बीचमा भौतारिइरहेका छन्। केही कमरेड ससाना पेशामा अल्झने कोशिस गरेका छन्। केही थान कमरेडचाहिँ माओवादीले नै शोषक र सामन्त पदवी दिएकाका ठाउँमा उपरखुट्टी लाएर बसेका छन्। र, तिनले पार्टी हेडक्वाटरको 'नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो' भन्ने मन्त्र जप्दै कहिले सदरमुकाम लिबाङ त कहिले काठमाडौं धाएका छन्।्
कमरेड हुरी अलमलमा छन्। उनको हेडक्वाटरले नै पूरा भयो भनेको राजनीतिक क्रान्ति रोल्पा नपुगी कहाँ अलमलियो?
खसोखास आफ्नै आँखाले हेर्न उनी काठमाडौं पुगेका छन्।
कलंकीबाट रत्नपार्क गुडेको गाडी पाँच मिनेटपछि जाममा फस्यो। हेर्दाहेर्दै सडकवारिपारि सेना र पुलिसले भरिए।
'राजाको सवारीजामजस्तो छ त?'
यात्रु एकापसमा मुखामुख गरे।
थाहा भयोः राष्टपतिको सवारी। राजाको मन्दिर धाउने परम्परा धान्न राष्टपतिको सवारी चलेको रहेछ। बसमा यात्रुले भने कि बिहानचाहिँ प्रधानमन्त्रीको सवारी जाम थियो।
झण्डै तीन घण्टा लामो जामपछि साइरनसहित पिलिक्कपिलिक्क बत्ती बाल्दै गाडीको लस्कर लाग्यो। र, सवारी घन्केपछि बल्ल बाटो खुल्यो।
राजा हुनु र नहुनु'मा सर्वसाधारणका दैनिक जीवनमा आएको तलमाथि भेट्न खोजे। नभेटेपछि कमरेड हुरी हलाक् भए।
जाम खुलेपछि गुड्दैजाँदा भद्रकालीअगाडि गाडी अर्को जाममा फस्यो। योचाहिँ सवारी जाम थिएन। जाममा परेको बेला उनको आँखा भद्रकालीमा अल्भि्कयो। यसअघिको मन्दिरमात्र देखे। मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जाने सबै नेपालीको साझा हुनुपर्ने भद्रकालीमा मन्दिर मात्र देखेर उनको मन झस्कियो।
'होइन के फेर्रियो त,' मनमनै आफूलाई सोधे। झ्वाट्ट अर्को मनले भन्यो, 'सिंहदरबार फेरियो कि?'
हेर्नलाई उनका आँखा खसखसाए। बाँकी कुरा केही पनि सोचेनन्। बस्, उनलाई हेर्नु थियो, छिटो भन्दा छिटो राजनीतिक परिवर्तनपछिको सिंहदरबार।
थानकोट इँटाभटामा काम गर्न आएका छिमेकीकहाँ रात बिताएर भोलिपल्ट सिंहदरबार पुग्दा यस्तै सवा ११ बज्दैथियो। उनले भेटे, सेनापुलिसले घेरिएको पुरानै सिंहदरबार। सम्हाल्न कोशिस गरे, 'ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि अलिकति तलमाथि त कसो नभएको होला र?'
को मु... भोटे हो?'
उनको मंगोल अनुहारलाई हेपेको चर्को स्वर उनको कानमा बज्यो। उनलाई भारतको शिमलामा 'गोर्खे बाँदर' भनेर गरेको अपमानजत्तिकै चर्को थियो त्यो स्वर। आफ्नै मुलुकमा गरिएको अपमानप्रति किन हो कुन्नि? गहिरोगरी बिझ्यो। मुश्किलले रिसलाई पैतलामुनि अचेट्दै भने, 'ङा कम्रेट हुरी। ङा रोल्पा ला।'
आफ्नै मातृभाषा खाम (अठार मगरातको मगर भाषा) मा रोल्पाको कमरेड हुरी भनेको सिंहदरबारले बुझेन।
'मु...मा..भोटेले के भन्छ,' एकजना बूढेले यसअघिको 'मु..' मा 'मा...' पनि थपेर भने। र, एकै गाँस पार्लान्जसरी झपराइको मात्रा बढाए।
'सिंहदरबार भनेर हेर्न आया हम् ब,' उनले नेपाली भाषाकै रोल्पाली लवजमा भने। रोल्पाली लवजको नेपाली भाषा बुझ्ने पनि भेटेनन्।
'ऐ तेर्रिमा...मु..हाम्रो नेपाली भाषामा बोल् न,' हप्काइको पारो अक्कासियो।
उनले जानेको मगर भाषा र रोल्पाली लवजको नेपाली भाषा मात्र थियो। यताउता हेरे, उनको भाषा बुझ्ने र उनीजस्ता गरिब खलकका कोही देखेनन्।
सिंहदरबार पस्न उनीसित पास थिएन। सिंहदरबारभित्रबाट आफ्नो मान्छेले पास पठाइदिनुपर्ने प्रावधान उनले थाहा पाए। उनको कोही भए पो पास पाउनु।
'हाम्जस्ता गौले र गरिप्गुर्बा भित्र छिर्न सक्तैनम्?'
रोल्पाली लवजमा सोधेको कसैले नबुझेपछि हातको इशाराले फेरि सोधे। उनको अनुहार र उनको गरिब बर्गको जीवनशैली झल्काउने लगाएको लुगा हेरेर हातकै इशाराले जबाफ पाए, 'भित्र पस्न पाइन्न।'
अध्यक्ष प्रचण्ड रोल्पामा रहँदासम्म अध्यक्षको सुरक्षामा खटिएको जनमुक्ति सेनाको टोलीमा थिए, कमरेड हुरी। शिविरमा बसेपछि पार्टीले उनलाई पार्टीमा काम गर्न पठायो। माओवादीमा लागेपछि दुईचार कुरा भए पनि बोल्न जानेका कमरेड हुरी छक्कापन्जा गर्नतिर कहिल्यै लागेनन्। त्यसैले केही भइहाल्छ कि भनेर पर्खी बसे। र, आखिरीमा सोधे, 'कोस्को हो तो यो सिंहदरबार?'
रोल्पाली लवजमा सोधेको कसैले नबुझेपछि फेरि हातकै इशाराले सिंहदरबार कसको हो भनी सोधे। कोही बोलेनन्।
गाडीमा सिंहदरबारभित्र र बाहिर गरिरहेका थिए, रामप्रसाद कोइराला, चुडामणि पौडेल, कृष्णहरि खनाल, भानुभक्त उपाध्याय, रामप्रसाद दाहाल, प्रद्युम्नशमसेर जबरा, कृष्णकिशोर नेपाल र प्रसन्नविक्रम शाह। सिंहदरबारको माथिल्लो तलाको नीति बनाउने कुर्सीमा सिंहदरबारमा बर्षौंदेखि गुड लाएर बसेकाका खलक मात्र थिए।
सिंहदरबार गेटअगाडि भित्रबाहिर गर्नेलाई हेरिरहेको बेला केही थान पत्रकार पुगे।
'रिरुमा सीएम कम्रेटले रास्नीतिक करान्ति सक्क्योे भनी फुक्या थे। हामी गरिप्को नि दिन आइगिछ भन्कन खुबई रमाइम्। तर, रोल्पाको हाम्रो गौमा अझै पुगेन। कहाँ अलमल परो भनिकन निजो खबर बुझ्न आहम् ब,' पत्रकारले सोधेपछि उनले रोल्पाली लवजमा भने, 'दोर्सो खारा मोर्चामा लागेको एट्टीवनको छर्रामध्ये चारवटा अझै झिकेको छैन। हेर्नुस् तो, दाइने खुट्टाले नाम्ररी टेक्न मान्दैन।'
कमरेड हुरीको बोली नसकिदै एउटा गाडी सिंहदरबार गेटमा पुग्यो। पत्रकारले गाडीमा सवार कमरेड अशोक (काठमाडौंमा आएपछि नारायणप्रसाद उपाध्याय) लाई देखाउँदै भने, 'तपाईंका कमरेड त भित्र छिरे।'
'अझ्झी हो र?'
झस्केर छिटोछिटो नजर लगाए, गाडीको शिशाबाहिरबाट। उनका कमरेड 'सर' भइसकेका थिए। आफ्नै कमरेडलाई चिन्न नसकेकोमा चुकचुकाए।
ठीक त्यसैबेला उनलाई पत्रकारले सुनाए, अहिलेका घरमुली सुशील कोइरालासहित मोहनशमशेर, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईका नाउँ। त्यसपछि उनलाई सोधे, 'यीमध्ये कोहीसित नाता लाग्छ?'
'सीएम कम्रेटसत ता बर्गीय नाता छ। रोल्पामा बस्दा गरिप्को वर्गको हुँ भन्थे ब सीएमले,' आफ्नो अध्यक्ष प्रचण्ड आफूहरुजस्तै गरिब र दुखी बर्गको उनले फ्याट्ट भने। कमरेड हुरीको जबाफ सुनेर पत्रकारले खित्का छाडे। किन खित्का छाडे भनेर उनी एकपालि फेरि गम खाए। त्यसपछि उनले जानेका र चिनेका नाउँ सम्भि्कएः लाममति पुन, जैसरा रोका, फौदबहादुर दमाई, जोखबहादुर घर्ती, लालबहादुर मेचे, पहरु थारु, जुक्तबहादुर चेपाङ, दोर्जे तामाङ, सुकधन राई, लोकवीर तुम्बापो, छिमी लामा, धनवीर ठगुन्ना, भक्त पासवान आदि।
उनका मनमा आएका उनीजस्तै गरिब कोही पनि सिंहदरबारमा नदेखेपछि यसअघिको सिंहदरबारजस्तै बिरानो लाग्यो। त्यसपछि उनका पाइला अनायास सिंहदरबारसित जोडिएको अदालततिर सोझिए। एक मनले भन्यो, 'अदालत त कसो नफेरिएको होला र?'
सर्वोच्च अदालत पुग्नेबित्तिकै देखे उही मुलुकी ऐन। र, अदालतभित्रबाहिर गरिरहेका राजा महेन्द्रसित आएका वर्णशंकर अनुहार। राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सबै ठाउँमा शाह, राणा र तिनका पुरेतखलकसहित हुनेखानेका मात्र बिर्ता देखेर हलाक् परे। उनको भाषा र मन बुझ्ने कोही भेटेनन्।
कहाँनेर टेक्ने हो? पाइला राख्ने ठाउँ खोजे। भेटेनन्। उभिएर हाँस्ने, खेल्ने र बोल्ने त परै छ।
एकछिन टोलाए, सर्वोच्च अदालतसित जोडिएको पुरातत्व विभागनेर। त्यसपछि बर्खामासको माडीखोला भन्दा मुश्किलले सडक तरेर कृषि बिकास बैंकनेर उभिए। अनि घरी हेरे पुरातत्व विभागलाई घरी सर्वोच्च अदालतलाई।
हेर्दाहेर्दै उनले झ्वाट्ट सम्भि्कए, आफ्नो तीनपुस्ते भविष्यसहित जिन्दगीका सम्पूर्ण सिरिखुरी धरेको माओवादी पार्टी अनि त्यसको हेडक्वाटरलाई।
जाने मन पलायो। लागे माओवादी हेडक्वाटर निवासतिर।
'सिएम कम्रेटको निवासअग्गेड छु त म? उभिएको हाम्रो हेडक्वाटर हो?'
उनका आँखा तिर्मिराए। आफूलाई चिमुटे। र, सामान्य अवस्थामा ल्याउने प्रयास गरे।
'रोल्पाबट आया हम् ब, सिएम कम्रेटलाई एकफेरा भेटम् भन्कन,' रोल्पाली लवजमा यति भन्दै घर वरपर नजर डुलाए।
'रोल्पा नपुगी करान्ति काँ अलमल भो,' कसैले नसोधिकनै आफैले भने। यताउति हेरिरहेको बेला कहाँ देखेजस्तो एकजना खाइलाग्दा मान्छे निक्लिए। सलाम सीएम कम्रेट भनी अनायास उठेको उनको दाया हात माथि नपुग्दै देखेजस्तो लाग्दालाग्दै ती मान्छे मिलिक्क भए। उनका अघिपछि सेनापुलिस थिए।
'सीएम कमरेड कार्यक्रममा जानुभयो त,' एकजनाले भने।
'अझ्झि, हो र?' उनी झसंग भए।
बाहिरिने ती मान्छे उनलाई घरी आफ्नै सिएम हुन्जस्तो लाग्यो घरी होइनन्जस्तो पनि। साँच्ची अलमलमा परे। उनले आफूलाई सोधे, 'मलई यो आँखाले धोका दियो कि पार्टी हेडक्वाटरले?'
उनले जति प्रयास गरे पनि छुट्याउन सकेनन्। उनको आँखाले आफ्नै सीएम कमरेडलाई घरी केपी ओली देख्यो घरी सुशील कोइराला।
त्यसपछि उनलाई भोक लागेजस्तो न प्यास लागेजस्तो भयो। छटपटी भयो। आफूलाई थाम्न नसकेपछि उनी थचक्क बसे। एकछिन आँखा चिम्लिए। त्यसैबेला उनका आँखामा जुलुस आयो, सहिद, बेपत्ता, घाइते र जनयुद्धमा सिरीखुरी धरेका अबोध कार्यकर्ता र तिनका अलपत्र परिवारका। अनि क्रमशः पुराना याम आए जुन याममा भोलि झुल्ने घाम सम्झी झरीमा उनीजस्तै धेरैजना भिजेका थिए। नेतालाई घरको बैकलमा लुकाएर सेन्टरी बसेका रात आए। आफूहरुले मासुभात खान दसैतिहार कुरे पनि 'देश खोजी बगाल रोजी' गदिरे भालेसित भात खुवाएका याम आए। मकै खाजा चपाउँदा पनि दुश्मनले सुन्ला भनी सुस्तरी चपाउँदै पार्टी नेतृत्वलाई चाहिँ गहुँको रोटी खुवाएका विगत आए। नेतृत्व बँचे न क्रान्ति हुन्छ अनि देशको मुहारसित गरिबका पनि मुहार फेरिन्छ आफू लुगलुग काँप्दै नेतालाई सिरक खपाइदिएका रात आए।
'सीएम कम्रेटले काटमुन्नु फेर्छु भन्थे। बड्डालई काटमुन्नुले फेरेछ। तेसै बड्डाले भन्यारैन्छन्, नेपाल्मा रास्नीतिक करान्ती सक्क्यो,' आफूलाई भन्दा भरोसा गरेको पार्टी हेडक्वाटर अनचिनार लागेपछि उनको मनले भन्यो, 'मूल नै धमिलिएछ र पो तल धमिलो बगेछ।'
के सम्झेर कुन्नि? उनी जुरुक्क उठे। हेडक्वाटरलाई एकपालि फरक्क फर्की हेरी छिटोछिटो बाटो लागे।
साइनबोर्डमात्र फेरिएको भेटे। उनीजस्ता गरिब, दुखी र इमान्दारका जिन्दगीमा कुनै मौसम फेरिएको भेटेनन्। उनको अनुहार र बर्गले अपनत्वबोध गरेर पाइला राख्ने ठाउँ काठमाडौंमा कहीँ भेटेनन्।
सडकमा जति पाइला फाले उति आए उनका आँखामाः गरिबको रहर एकबार कसो नफुल्ला भनी जिन्दगीका सिरीखुरी धरेका बेदाग अनुहार। अरबको खाडीमा भेडा चराइरहेका र भारतका गल्लीमा चौकीदारी गरिरहेका अबोध आँखा आए। उनका बेपत्ता दाजु, उनका सहिदपत्नी जेनीसहित धेरै तन्नेरी आए।
'मेर्दाजु र मेर्जोईले करान्तीमा बगाएको खुन कुकुरको मूत भो त?'
आफ्नो दाजु र श्रीमतीले बगाएको रगतको मूल्य सम्झेर उनी झस्किए। लेखिएको थियो, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष नेपाल। हो, त नेपाल गणतन्त्र भयो। धर्मनिरपेक्ष भयो।
अनि आफूजस्तै गरिब र सीमान्तकृत अनुहारलाई। उनै दुईचारबाहेक बाँकीका जीवनशैलीमा तात्विक फरक भेटेनन्।
'आब काँ जाने तो?'
उनको जिउ सर्सरायो। एकतमासले आङ तातेजस्तो भयो। त्यसपछि हिंडे। हिंड्दाहिंड्दै उनका बाले भनेको सम्भि्कए, 'कि आँटले खायो कि ढाँटले।'
ढिकी कुटेजसरी भए पनि दगुरे। रोल्पा लेखेको एउटा गाडी मात्र देखे। सबै रंगका अनुहार र गरिखाने मान्छे पनि आफूखुसी हाँस्न र रुन पाउने रंगीन नेपाल बनाउन गुडेको उक्त गाडी कमरेड हुरीका केही थान नेतालाई बालुवाटार र सिहदरवार पुयाएपछि अलपत्र छाडिएको थियो।
'रोल्पा' देख्नेबित्तिकै अनायास उनका आँखा हतारहतारमा बसमा चढेका र चढ्न लागेका अनुहारमा बल्झिए।
देखे, उनका जस्तै चिसा आँखा। देखे, कोही आमा गुमाएका त कोही दाजु गुमाएका त कोही शरीरको अंग गुमाएका त कोही काठमाडौंका इँटाभट्टाबाट फर्केका त कोही भारत, साउदी अरब, मलेसियाबाट। कतिखेर गुड्ला भनी पर्खिरहेका आतुर अनुहार।
कम्प्युटरका लागि केहि महत्वपूण सफ्टवेयरहरु !
१. अनलकर (Unlocker) : तपाईले कुनै कुनै फाइल तथा फोल्डरहरु डिलिट गर्न खोज्दा “file is in use” भनेर डिलिट नभएर दिक्क पारेको होला ।
यस्तोमा यो सफ्ट्वेयर उपयोगी हुन्छ । यसले यसरी लक (Lock) भएका फाइल तथा फोल्डरहरुलाई बन्द गरिदिन्छ ।
४. मेलस्टोर (MailStore) : यदि तपाई इन्टरनेट नभएको ठाउँमा पनि आफ्नो इमेलहरु हेर्न चाहनु हुन्छ भने यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यसले
इन्टरनेटको पहुँचमा सबै इमेलहरु कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्छ जसलाई तपाईले पछि इन्टरनेट नभएको ठाउँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । यसको मद्दतले
इमेलहरु पेन ड्राइभमा पनि राख्न सकिन्छ ।
एन्ड्रोइड, अपरेटिङ सिस्टम अहिले विश्वभरका अधिकांश मोबाइल उपकरणको हिस्सा बनेको छ। पछिल्लो त्रैमासमा सार्वजनिक भएको रिपोर्ट अनुसार अहिले विश्वका कुल स्मार्टफोन मध्ये ७५ प्रतिशतमा यो अपरेटिङ सिस्टम छ,। त्यसमा पनि मोबाइल उपकरणको अहम् बजार हिस्सा भएको सामसुङ कम्पनीका मोबाइल अधिकांशका हातमा छन्। अधिकांशका हातमा स्थान पाएको सामसुङ मोबाइलका लागि केही उपयोगी सेक्रेट कोड यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
मिठो सम्झना !!!
अशान्त मन र जलिरहेको मुटुबाट भए पनी तिम्रो नाम मा सायद अन्तिम उपहार स्वरुप भाबनारुपी कोसेलीहरुको सौगात प्रेषित गरेको छु । मन त थिएन तिमीलाइ यि सब लेखेर तिम्रो ब्यक्तिगत जिबनलाइ आघात पुरयाउनु तर पनि हेरन उठिसकेका यि निर्दोष कलम ब्याकुल छन मन भित्रका बोझीला अनी चोटिला भाबना हरु निर्जिब कागज माथि बिसाउन अब बाँकी नै के रह्यो र बस एक थोपा कालो मसी र एक टुक्रा सेतो कागजमा भाबना हरु पोख्नु बाहेक यती सम्मको अधिकार त दिन्छौ होला नि हैन जब कि म सँग कुनै अधिकार नै छैन ….।
समयको यो लामो दौडान पछी आज अनायसै मायाका बेग हरु थेग्नै नसकिने भेल बनेर उर्लिएको छ तिमीले त मलाइ बिरसी सक्यौ होला म पनी तिमीलाइ बिस्रने चेस्टा गर्दै थिएँ तर आज अचानक बर्षौ बाद तिम्रो स्मृतीहरु सपनामा प्रतिबिम्ब बनेर आएको छ । त्यही नसालु नजर,मन्द मुस्कुराहट मलाइ नै जिस्काइरहेछ तिमीले त भुलीसक्यौ होला ति रंगिन गोधुली साँझहरु ..जब जब तिमीलाइ पिडा र दुखहरु आइपर्थे बिसाउने चौतारी खोज्दै मेरो समिप आँउथ्यौ म छहारी बनेर तिमीलाइ आफ्नो न्यानो काख सुम्पनथे तिमी त्यही काखमा लुटपटिएर बेदना हरु आँसुमा बगाउँथ्यौ म कति सम्हालथेँ तिम्रा ति मोतीका दाना रुपी आँसु हरु…। तिम्रा ति मुल्यहीन आँसु हरु मेरा लागी अमूल्य उपहार थिए मैले त्यही तिम्रो आसुमा आफ्नो सुन्दर भबिष्य बगाएको थिएँ म मेरो उज्यालो भबिष्य खोज्थे तिम्रो त्यो अश्रुत नयनको अनन्त गहिराइ भित्र डुबेर अझै पनि चिसै छ तिम्रा आँसुले भिजेका यि काखहरु ……॥
पुर्णीमाको रातहरुमा जुनको सितलतालाइ ओढी सपना बुन्न खोज्छु कतै तिमी मेरो अध्याँरो जिबनको रोशनी बोकेर आउँछयौ कि भनेर,बर्षातको भेल सँगै पानी बनेर बग्छु कतै तिमी समुन्द्रको गहिराइ भित्र तैरिदै छौ कि भनेर, ति अँध्यारा सुन्य रातका चम्किला ताराहरुलाइ हेर्छु कतै तिमी त्यसरी नै मलाइ चिहाइरहेकी छौ कि भनेर,बिहानीको ति सेता टलकिएका हिमशिखरहरुमा खोज्छु कतै तिमी मलाइ नै जिस्काइरहेकी छौ कि भनेर तर सब यि मेरा निरर्थक प्रयास मात्र थिए जब कि तिमी टाढा क्षितिज पारी बिलकुलै नौलो संसारमा रमाइरहेकी थियौ तिम्रो आफ्नै ब्यक्तिगत संसारमा ……॥
जलाउन सक्दिन ति तिम्रा तस्बिर हरु जुन मेरो मन मसतिष्क भित्र सजिएको छ। च्यातेर फाल्न सक्दिन तिम्रा ति सुनौलो शब्दहरुले भरिपुर्ण मायाका कोसेलीहरु जहाँ मेरो भबिष्य कोरिएको छ । भुल्न सक्दिन ति प्रेमका चौतारा हरु जहाँ मैले आफ्नो वियोगको पिडा बिसाउनु छ । न बिस्रन सक्छु ति छहराहरु जहाँ मैले जलनका आँसुहरु पखाल्नु छ। म चाहेर पनि मेट्न सक्दिन ति तिम्रा नामहरु जुन मेरो नाम सँग जोडिएको छ ।
अझै पनि तिमी प्रती कती समर्पित छु हिजो भन्दा पनि कयौं गुणा…. । आज तिमी प्रतीको माया,मोह हरु प्रगाढ भएको छ । तर पनी के गर्नु समय म भन्दा धेरै अगाडी गइसकेको छ बस अब त बिगतको मिठो स्मृतीहरुले अध्याँरो भबिष्य सजाउनु सिवाय…। तिम्रो जिन्दगीले सधैं सफलताको शिखर चुमुन म आफु विफल भएपनी तिमी हिड्ने गोरेटो फुलले सजिउन मेरो गोरेटो काँडाले भरिएपनी जिन्दगीको गोरेटोमा लरखराउदा लरखराउदै कतै ढलेछु भने श्रद्धाञजली स्वरुप एक थुँगा फुल चढाइदेउ ल । बस मात्र ……..।
शब्दहरु यो मन मस्तिकको अन्तर कन्दराबाट प्रकट भईदिदा यो निर्जिव रुपी कलमको माध्यमबाट अर्थ पुर्ण जिन्दगीको भावपुर्ण परिकल्पनामा कुशलताको कामना गर्दै उज्जवल भविष्यको मिठो सपना बुन्दै लामो जिवनको छोटो यात्रामा मायालुको यादमा प्रदेशी जिवन विताउने चेस्टा गरिरहेको छु ।
शायद श्वास प्रश्वासको प्रक्रियामा बम र बारुदको धुलो र धुवाँलाई अग्रस्थान दिदै धनाड्य बन्ने चाहानामा यो उराठ लाग्दो मरुभुमिमा १२ घण्टा काममा जोतिएर पनि आत्मीय मायालुलाई नजिक बनाउन नसके पनि भौतिक रुपमा मायाको शब्दजाललाई टाडा बनाएर दिन प्रतिदिन सँगमको परिकल्पना बोकेर जिवनको यात्रालाई छोटयाउदैछु । आखीर भगवान बलिदेबको लिला भनु या जे भने पनि सृष्टि कर्ताको चक्रव्युह न हो भनेर भन्नु बाहेक अरु के नै सोच्न सकिन्छ र ?
हृदयमा पिडा भएर पनि देखावटिपनको सन्सारमा सदा खुशि रहि रहने यो स्वार्थी संसारमा मिठा मिठा सम्झनाका कोसेलीहरुलाई पलपलमा उब्जिएका तरेलीहरु यो सेता कोरा कागतको मैदानमा निर्जीव तर संन्सारलाई चमत्कार गर्न सक्ने र विनास पनी गर्न सक्ने शक्तिवान कलमको सहारा लिएर भावपूर्ण जिन्दगीको सुनौला रुपी यात्रालाई सुखदसमुन्नती समृद्धिको लागी सृष्टिकर्तासँग दिनहु कामना गरिरहेको छु ।
बाचा त हामीले जोडि ढुकुरको भएर जिउने खाएका थियौ तर के भनौ आखिर अदृश्य भए पनि जिन्दगीको हरेक पल हरेक कोणबाट माया र ममतामा सजाएको नै थिए जस्तो लागेको थियो । दैवको लिला भनौ या त समयको खेल भनौ विधिको विडम्बनाले गर्दा यस्तो हुन गयो । तिम्रा ति कोमल मनको सारथि भएर अदृश्य माया दिए कै थिए । आफना मनमा गुम्सिएका तरङ्गहरु खुलस्त रुपमा तिमीले फुकाउन किन हिचकिचावट गरेका थियौ आखिर सम्पूर्ण सजिव प्राणिको मन मस्तिष्क र हृदयको कुना कन्दरामा बास बसि रहने र दुख र सुखको सामना गर्नु पर्ने यो नै भगवानको कर्तव्य भएकोले मानिसले चाहेर पनि जिन्दगीमा सबै चिज पाउँदो रहेनछ भन्ने कुरा तिम्रा ति अन्तरयामी शब्दहरुको भावबाट प्रष्ट बनाई दियौ । कल्पनाको संन्सारमा वालुवाको महल बनाए झै तिम्रो मन मस्तिकलाई मेरो हृदयको कुना कन्दरामा सजाएको थिए । आखिर मैले तिमीलाई हृदय देखि नै माया गरेकै थिए । तिम्रो हरेक लक्षमा मेरो साथ रहि रहने छ भने कै थिए । तर पनि तिमीले आफुलाई स्वार्गको अप्सरा जस्तै सर्वकृस्ट ठान्यौ । मेरो पवित्र मायालाई कसिङ्गर सम्झेर हावामा उडाई अरुको संसारमा रमाउन चाहन्थ्यौ भने किन मायाको फोस्रो जाल बुन्नु थियो छर्लङ्ग हुने गरि मेरा सामु भनेको भए पनि अविर जात्रा गरेर बिदाई दिने थिए । माया र प्रेम भनेको पाउन मात्र गरिदैन गुमाउनु पनि हो । विश्वास दिनेलाई माया भनेको जिवनको अभिन्न अङ्ग हो खेल सम्झने हो भने मायालु एउटा अस्तिपंजरको हाड र मासुको थुप्त्रो नै त हो जिन्दगी । अरुको खुशिलाई आफनो खुशी हो भनेर आफुमा भएको दुख पिडा र बेदनालाई मलम लगाउन उराठ लाग्दो मरुभुमिको एकान्तमा बम र बारुदको प्रबाह नगरि अतितका पलहरुलाई सम्झेर बस्दै गहभरि आशु बगाउदै वर्तमानसँग रमाउन बाध्य भएको थिए । आखिर जति नै धनाढ्य शिक्षित सुन्दर भएपनि एकदिन यो स्वार्थी संसारबाट खाली हात यमराजको घरमा अवश्य पनि जानै पर्ने दिन आउनेछ । यो सृष्टिको सुनिश्चित नियम नै हो । त्यसैले यो लामो दुई दिनको जिन्दगीको मुल्यवान समयलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरि हासि खुशी रमाउने बाचा त दिएको थिए । शायद मेरो औकात थिएन सुन चाँदि र हिरामोतिले झकि झकाउ बनाउन सक्ने तापनि पवित्र माया दिएर सदा खुशी राख्ने प्रयत्न गरेकै थिए चौरासि परिकारको भोजन र महलमा राख्न नसकेपनि साग र सिस्नो खुवाएर भए पनि खरको झुपडिमा पवित्र माया दिएर ओठ भरि मुस्कान दिई रहने थिए ।
शायद मेरो यो जिन्दगी यो युगमा यस्तै भई हाल्यो । तिम्रा ति अब आउने दिनहरुमा कहिले दुख र संकट भन्ने कुरा नआओस सदा सर्वदा खुशी रही तिम्रो त्यो सुन्दर रुपी मुहार मृग नयनी आँखा बाघको जस्तो कम्मर कोइलीको जस्तो सुवास पुर्ण बोली एक धनाढ्य शिक्षित र सम्पन्न व्यक्तिलाई सुम्पनु र सदा सदाको लागी खुशि रहिरहनु यहि छ मेरो हृदय देखिको नै शुभ कामना
....................पागलप्रेमी अर्जुन................................................................. .....................................................................................
टप १० नेपाली नेपाली एन्ड्रोइड एप्सहरु - Top Ten Nepali Android Apps
पछिल्लो समय नेपालमा स्मार्टफोनको बजार उकासिदैं छ । प्रयोगकर्ता बढका छन् भने फरक स्वादका एप्सहरु पनि बन्दैछन् । गुगलले विकास गरेको एन्ड्रोइड सिस्टमबाट लाखौं एन्ड्रोइड फोन प्रयोगकर्तालाई लक्षित गदै नयाँ नयाँ एप्लिकेशनहरु पनि बन्दै आएक छन् । यसैबीच गुगल प्लेबाट धेरै भन्दा धेरै डाउनलोड भएका र उपयोगी उत्कृष्ट १० नेपाली एप्सहरुको चर्चा यहाँ गरिएको छ :
www.nepalipatro.com.np ले विकास गरेको यो एप्लिकेशन (डाउनलोड : १ लाख+, रेटिङ: ४.७/५) प्रत्यक नेपालीका लागि उपयोगी र आवश्यक क्यालेन्डर हो । यसमा अरु क्यालेन्डरमा हुने सबै विशेषताका साथै थप सुविधा पनि राखिएको छ ।
2. Nepal Load Shedding Schedule
चन्द्र र एलिजा श्रेष्ठले विकास गरेको यो एप्स डाउनलोड र उपयोगीताका आधारमा उत्कृष्ट २ मा पर्ने एप्स हो (डाउनलोड : १ लाख+, रेटिङ: ४.६/५) । नेपालमा समय समयमा लोडसेडिङ तालिका परिवर्तन भइरहने भएकाले यो एप्सले तपाइलाई निकै सजिलो पार्न सक्नेछ । एप्स इन्टर गरेको भरमा एलइडी टर्च समेत प्रदान गरी सजिलै सबै समूहको लोडसेडिङ समय हेर्न सकिन्छ ।
3. Radio Nepali
सचिन शाक्यले विकास गरेको यो एप्स (डाउनलोड : १ लाख, रेटिङ: ४.५/५)ले नेपालका ८० भन्दा बढी रेडियो स्टेशनका कार्यक्रम तपाइको एन्ड्रोइड डिभाइसमा कनेक्ट गराउँदछ ।
4. My Nepal – My FM
दिपक खनालले बनाएको यो एप्स (डाउनलोड : ५० हजार+, रेटिङ: ४.६/५)मा नेपालभर चर्चित भएका अडियो भिडियो, नेपाली एफएम, जोक्स, अडियो स्टोरी, डेली होरोस्कोप, अन्तर्वार्ता सहित सिंगल एप्समा तपाइको मन पर्ने नेपाली टिभी सेरिज पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
5. NepaliFlagLive WallPaper
ब्एएद्धव्इथ्ले विकास गरेको यो वालपेपर हालसम्म १० हजार भन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका छन(रेटिङ: ४.६/५) ।
6. Nepali Zonal maps
तपाई आफ्नै देश नेपालको विभिन्न अन्चल वा जिल्ला बारे थाहा पाउन चाहानुहुन्छ भने Sanjaal Corps ले बनाएको एप्स Nepali Zonal mapsको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ । जुम गरेर सजिले विभिन्न ठाउ हर्न सकिने यो एप्सलाई हालसम्म १० हजार भन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका छन् (रेटिङ: ४.०/५) ।
7. Newc of Nepal
Gundruk Apps ले विकास गरेको Newc of Nepal (डाउनलोड : १० हजार+, रेटिङ: ४.४/५)ले नेपालका समाचारहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसबाट इकान्तिपुर, हिमालायन टाइम्स, नेपाली न्युज तथा बिबिसीका समाचारहरु सजिलै पढ्न सकिन्छ ।
8. Nepal Bhasa Dictionary
एनपी ले विकास गरेको यो एप्स (डाउनलोड : १० हजार+, रेटिङ: ४.५/५) ले नेवारी भाषा भाषा सिक्न चाहनेका लागि सामान्य रुपमा नै अंग्रेजी भाषाबाट नेवारी भाषामा रुपमान्तर गर्न सक्दछ ।
Gundruk Apps ले विकास गरेको nLocateभ एप्सबाट तपाई वरपरको ठाउ सजिलै पत्ता लगाउन सकिने छ । आफ्नो लोकालिटीलाई एक्स्प्लोर गर्न का लागि यो एप्स उपयोगी छ । (डाउनलोड : १० हजार+, रेटिङ: ४.३/५)
10. Taxi Fares Nepal
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हामी सधै ट्याक्सीबाट ठगिइरहेका छौं । APPI KALI को Taxi Fares Nepal ले ट्याक्सीको भाडादर र ठाउँको दुरी अनुसार सही रकम निकाल्दछ । (डाउनलोड : १० हजार+, रेटिङ: ४.४/५) स्रोत : livingwithict.com
नेपाल बाट हेरिने सर्बाधिक ५० वेब साइट सुची !! - Top 50 Website list of Nepal
नेपाल मा दिन प्रति दिन इन्टरनेट प्रयोगकर्ता को सख्या बढ्दो छ !! सूचना तथा प्रबिधि को तिब्र विकास का इन्टरनेट प्रयोगकर्ता को संख्या बढ्दो छ !! नेपालमा सबैभन्दा बढी इन्टरनेट मोबाइल बाट प्रयोग गरिन्छ !! गएको २ वर्ष मा नेपाल मा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ८० प्रतिसत ले बढेको थियो ! यसबाट पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ नेपालमा इन्टनेट प्रयोगकर्ता दिन प्रतिदिन निकै उच्च दर मा बढ्दो छ !!
नेपाल बाट हेरिने सर्बाधिक वेब साइट को सुचिमा पहिलो फेसबुक डटकम रहेको छ !!
नेपाल बाट हेरिने सर्बाधिक ५० वेब साइट को सुची यसप्रकार छ !!
घर जग्गा नेपाल मार्फत घर जग्गा किन्न वा बेच्न का लागि उपयोगी लिंक हरु :
१. घर किन्न को लागि : http://www.gharjagganepal.com/house-for-sale.html
२. जग्गा किन्न को लागि : http://www.gharjagganepal.com/land-for-sale.html
३. घर भाडा मा लिन को लागि : http://www.gharjagganepal.com/house-for-rent.html
४ . फ्ल्याट भाडा मा लिन को लागि : http://www.gharjagganepal.com/flat-for-rent.html
५ . घर जग्गा बेच्न वा भाडा मा लगाउन को लागि : http://www.gharjagganepal.com/list-your-property.html
कुनै Software को प्रयोग बिना नै Drive वा Folder लक गर्नुस्
तपाईंले यो Trick को प्रयोग गरेर आफ्नो कम्प्युटरको Drive वा Folder लाई Lock गर्न सक्नु हुनेछ । यो Trick Windows Xp को लागि काम लाग्छ । सबै भन्दा पहिले Toolbar को Tools Option मा जानुस् र त्यस पछि Folder Option , View Option र View Option को सब भन्दा Last को Option .Use Simple File Shareing [Recommended] मा । त्यसको Tick मार्क बक्समा Tik लगाएको होला , त्यो Tik लाई हटाइदिनुस् । अब तपाईंले Lock गर्न चाहनु भएको Folder अथवा Drive लाई Right Click गर्नुस् Properties मा जानुस् र Security Option मा क्लिक गर्नुस् । त्यहा तल (Full Control,Read,Write,Modify etc.) जस्ता Option हरु होला । त्यसमा तपाईंले चाहेको अनुसार Deny बक्समा Tick मार्क लगाउनुस् । यदि तपाईंले Full Control मा Tick लगाउनु भयो भने एकै चोटि सबै Option हरु Deny हुनेछन । अब Apply र ok गर्नुस् । यति गरी सके पछि तपाईंको काम सकियो । अब हेर्नुस् तपाईंले Lock गर्नु भएको Folder वा Drive को फाइल साइज "०" भई सकेको हुनेछ र तपाइले उक्त Folder खोल्न चाहनु भयो भने खोलिने छैन । ACCESS IS DENIED भन्ने message Dispaly हुनेछ । यदि तपाईंलाई त्यो folder फेरी Unlock गर्नु पर्‍यो भने अघि तपाईंले Full Control Deny बक्समा लगाउनु भएको Tick लाई हटाइदिनुस् । छैन त सजिलो ??
याद राख्नुस् यो Trick मात्र NTFS file system मा उपयोगी हुन्छ । एक चोटि ट्राइ गरेर हेर्ने कि ??
प्रस्तुतकर्ता prakash.shoshit 1 comment:
विन्डोज XP सि.डि को product key कोड पत्ता लगाउने तरिका
तपाईं सँग विन्डोज XP सि.डि छ र आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न चाहनु भएको छ तर तपाईंलाई सि.डि को product key थाहा छैन भने एउटा सजिलो तरिका छ product key पत्ता लगाउने र यो product key ले १००% काम गर्छ ।
@ सबभन्दा पहिला XP को सि.डि लाई सि.डि रोममा हाल्नुहोस् र रोम लाई right क्लिक गरेर open मा क्लिक गर्नुहोस् ।
@ अब I386 भन्ने फोल्डरमा डबल क्लिक गर्नुहोस् ।
@ त्यस भित्र UNATTEND.TXT नामको फाइल खोज्नुहोस् र डबल क्लिक गरेर खोल्नुहोस् ।
@ त्यहा लेखिएका टेक्स्टहरु मध्य सबभन्दा Last मा हेर्नुहोस् ।
@ तपाईंले खोज्नु भएको Product key त्यहा लेखिएको पाउनु हुनेछ ।
र XP instel गर्दा product key माग्यो भने यही key रखिदिनुहोस् अबस्य काम गर्छ ।
साइबर Attack रोक्नेछ "ईन्टरनेट टेलिस्कोप" ले
बैज्ञानिकहरुले यस्तो सिस्टम तयार गरेको छ जो ईन्टरनेटमा यस्तो कम्प्युटरको स्थिती पत्ता लगाउन सक्षम छ जस्लाई कुनै गलत नियतको लागि कुनै सफ्टवयरले नियन्त्रणमा राखेको छ । यस्तै गलत नियतका साथ software को नियन्त्रणमा राखेकै कम्प्युटर बाट नै spam ईमेल पठाउने गरिन्छ जसबाट तपाईंको कम्प्युटरको जासुसी पनि हुन सक्छ । बैज्ञानिकहरुले हालै तयार गरेको "ईन्टरनेट टेलिस्कोप" नामक software system ले यस्तो किसिमको साईबर हमला बाट रोक्न मद्घत गर्नेछ । यो सिस्टमले ईन्टरनेटको माद्यम बाट यो पनि भन्न सक्छ कि कुन कुन कम्प्युटरमा कस्तो कस्तो किसिमको भाईरसको सिकार छ र कम्प्युटरहरुको यस्तो map पनि create गर्न सक्छ कि जुन ग्लोबली साईबर हमलाको लागि प्रयोग भईरहेको छ । "ईन्टरनेट टेलिस्कोप" साइबर हमलावरहरुको सिस्टममा घुसेर त्यस्लाई क्र्यास पनि गर्न सक्छ तर उनिहरुले यो सिस्टमको सजिलै डिटेक्ट गर्न सक्दैन । यसलाई एटलान्टा को "एँड्गेम सिस्टम" ले Develope गरेको हो ।
हातको ईशाराले चल्ने टि.भी.
प्रविधिमा आइरहेको निरन्तर विकासले हामीलाइ अनेक सुविधा दिएको छ । प्रविधिको एउटा चमत्कार सुन्न तपाइँ तयार हुनुहोस् । टीभीका शौखिनहरूका लागि अब नयाँ प्रविधि आइसकेको छ, जसलाइ रिमोट कन्ट्रोल चाहिन्न । उसले तपाइँको इशारा नै काफी हुन्छ । टीभी अगाडि उभिएर हातको इशाराले टीभीको च्यानल परिवर्तन गर्नेदेखि त्यसको आवाज नियन्त्रण गर्नेसम्मको सुविधा पाउनु हुनेछ । तोशिबाको क्याम्ब्रिज रिसर्च ल्याबरोटरीले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ विभागको सहयोगबाट यो प्रविधिको विकास गरिएको हो । यो प्रविधि जोडिएको टीभी अगाडि जो व्यक्तिले इशारा गर्छ, उसैको आदेश मानेर आवाजमा घटबढ गर्छ । जो व्यक्ति टीभी अगाडि देखिन्छ, टीभीमा जडान भएको सिस्टम सक्रिय हुन्छ र उसले आफैँ टीभीको डिस्प्ले सिस्टमको कन्ट्रोल अप्सन देखाउन शुरू गर्छ । यसलाइ चलाउन तपाइँले हातको इशारा गरे मात्र हुन्छ । यो प्रविधिले तपाइँको हातको हल्लाइबाट के गर्ने भनेर बुझ्दछ । कम प्रकाश भएको बेलामा पनि यसले तपाइँको हातको मुभमेन्ट (हल्लाइ) थाहा पाउन सक्छ । तोसिवाका प्रोफेसर रोबर्टो सिपोला र डा. बिजर्न स्टेन्जर तथा इन्जिनियरिङ विभागका टम वुडलीका अनुसार, यो विधि ग्राहकहरूका लागि नयाँ र अनौठो अनुभव साबित हुनेछ । तर अझै पनि खोजकर्ताहरूका अनुसार यो प्रविधि रिमोट कन्ट्रोलजत्तिकै सशक्त चाहिँ हुने छैन । तर खोजकर्ताहरूले यस प्रविधिलाइ रिमोट कन्ट्रोल जत्तिकै सशक्त बनाउन चाहिँ अनुसन्धानलाइ जारी राख्ने बताइरहेका छन् ।
Nepali Movie - Loot - Watch Online
लेबल: Mobile Tips
गूगल मा आफ्नो खोजलाई परिस्क्रित गर्ने ८ वटा तरिकाहरु
गूगल हामी सबैको साथी , यसले हामीलाई जुनै विधाको बारेमा पनि जानकारी लिनमा मदत गर्दछ / शायद गूगल बिना संसार निकै नै पछाडी हुन्थ्यो होला/ यसमा हामी कुनै कुरो खोज्दा त्यो शब्दलाइ search box मा type गर्दछौं तर कतिपल्ट आफुले खोजेको कुरो नपाऊन पनि सकिन्छ कि त गूगल ले हामीले खोजेको भन्दा अरु अरु नै असान्दर्भिक कुरा हरु देखाउन थाल्दछ अनि हामीले फेरी शब्दहरु फेरी फेरी type गर्न पर्छ जबसम्म आफुले खोजेको कुरो निक्लिदैन/ आउनुहोस अब expert तरिकाले गूगल search गर्न हामी पनि सिकौं/
१) सटिक वाक्यांस ( Explicit Phrase ) जस्तै तपाइलाई internet marketing को बारेमा खोज्न मन छ भने सिधै internet marketing टाइप गर्नुको साटो यो phrase लाइ double inverted commas "----" ले बन्द गरिदिनुहोस /
उदाहरण : "internet marketing "
२)शब्द हरुलाई समाबेस नगर्नुहोस( Exclude Words ) जस्तै तपाई internet marketing को बारेमा खोज्न चाहनुहुन्छ तर त्यसभित्र भएको बिज्ञापन(advertising ) लाइ प्राथमिकता दिन चाहनु हुन्न भने जुन वाक्य लाई तपाई गूगल ले आफ्नो खोज मा नदेखावोस भन्न चाहनुहुन्छ , त्यो शब्दको अगाडी "-" चिन्ह को प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ /
उदाहरण : internet marketing -advertising
३) बिशेष साईट मा खोज्दा (Specific Site Search ) कुनै साईट मा आफ्नो खोजको केहि सन्दर्भ सामग्री खोज्दा ( त्यो साईटमा Search गर्ने सुबिधा नभएपनि ) Site:वेब साइटको नाम.com प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ /
उदाहरण: "internet marketing " site:pakhribasupdates .blogspot .com
४) एकै प्रकारका शब्द हरु खोज्नु पर्दा (Similar Words and Synonyms ) तपाई आफ्नो खोजमा एकै अर्थ लाग्ने शब्द हरु पनि भेटाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो शब्द को अगाडी "~" चिन्हको प्रयोग गर्नुहोस/
उदाहरण: "internet marketing " ~professional
५) बिशेष document को प्रकार (Specific Document Type ) कुनै बिशेष प्रकार को फाइल हरु खोज्नु पर्दा filetype: को प्रयोग गर्नुहोस/
उदाहरण : Power Point presentation खोज्दै हुनुहुन्छ भने "internet marketing " filetype :ppt टाईप गर्नुहोस 6) यो कि त्यो (This or That ) गूगललाइ तपाई जे खोज्ने सुझाब दिनुहुन्छ , त्यसले त्यहि नै खोज्छ तर तपाइले आफ्नो खोज संग सम्बन्धित अरु पनि खोज्न मन छ भने आफ्नो खोज हरुको बिचमा OR थप्न सक्नुहुन्छ / OR जहिले पनि capital letters मा हुनुपर्छ /
उदाहरण :internet marketing OR advertising
७) फोन सुची (Phone Listing) तपाइलाई कसैले फोन गर्यो तर तपाइले त्यो नम्बर चिन्नु भएको छैन भने गूगल मा भएको phonebook feature प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ /यो सुबिधा देश पछि फरक हुन सक्छ /
उदाहरण : phonebook:9807373898
८) Calculator ठुलो ठुलो हिसाब गर्नु पर्दा Calculator खोजिरहनु पर्दैन , गूगल कै खोज बाकस मा नम्बरहरु type गर्दा हुन्छ /
उदाहरण : 48938939*८७८९८४
मोबाईल फोन यस्तो साधन हो जस्को प्रयोग दिनानु दिन बददै गई रहेको छ, संचारको एकदमै सुलभ साधन मोबाईल फोन नै हो, यसमा पाइने बिभिन्न सुबिधा भएकै कारण यसको लोकप्रियता बढदै गएको हो, यद्दपी कतिपय सुबिधाहरु सबै प्रयोगकर्ताहरुल ाई थाहा नहुन सक्छ। त्यही मोबाईल फोन आवश्यक ईमर्जेन्सी परेको बेला हाम्रो जिबन रक्षक पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा सायद सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ त्यसैले यस बारे छोटकरीमा बर्णन गर्दैछु।
१) के तपाईंलाई थाहा छ ? मोबाईल फोनको बिश्वब्यापी ईमेर्जेन्सि नम्बर ११२ हो र यो नम्बरलाई जुन सुकै बेला (जस्तो कि प्याड लक भएको बेला पनि) पनिडायल गर्न सक्नु हुन्छ। यदी मोबाईलको आफ्नो सिग्नल कमजोर भए वा आउट अफ कवरेजर एरीया भए पनि यदी ईमेर्जेन्सि भएको खन्डमा ११२ डायल गर्न सक्नु हुन्छ जस बाट तपाईंको मोबाईल सिग्नल नजिकको कुनै पनि नेट्वोर्क सँग जोडीन पुगी आवशकिय मद्त लिन सकिन्छ।
२) के तपाईंलाई आफ्नो मोबाईल सेटको सिरियल नम्बर थाहा छ? छैन भने आज नै पत्ता लगाइ हाल्नुहोस! जस्को लागि मोबाईल सेट मा *#०६# डायल गर्नुहोस त्यसपछी स्क्रीनमा देखा परेको पन्द्रअंकको नम्बर नै तपाईंको मोबाईल सेटको सिरियल नम्बर हो जुन संसारको कुनै पनिमोबाईल सेट सँग नमिल्ने किसिमको यूनिक हुन्छ त्यसपछी त्यो नम्बरलाई नोट गरी शुरक्षित राख्नुहोस। यदी आफ्नो मोबाईल सेट कुनै कारण वस हराएकोखण्डमा मोबाईल सर्विस प्रदान गर्ने कोम्पनीलाई सो सिरियल नम्बर दिई ब्लक गर्न लगाउनुहोस त्यसो गरेपछी सो मोबाईल सेट अन्य कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्ने छैन। यदी चोरले सिम कार्ड नै चेन्ज गरे पनि त्यो सेट प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसो गरे तपाईंको आफ्नो मोबाईल फिर्ता गर्न नसके पनि मोबाईलमा रहेको आफ्नो महत्वपूर्णकुराह रु अन्यको हातमा पर्न बाट बच्न सकिन्छ।
३) सम्झनुहोस चोरहरुले तपाईंलाई बलजफ्ती पक्रेर ATM मेसिनबाट पैसा झिक्न लगायो जुन बेला चोरहरुको सामु तपाईं मोबाईल वा अरु कुनै माध्यमले अन्य कसैसँग मद्त माग्न सकिरहेको छैन भने, यस्तो अवस्थामा चलाखीपूर्ण तरिका अपनाएर तपाईं प्रहरीको मद्त माग्न सक्नु हुनेछ। जस्को लागि तपाईंले ATM कार्डको पिनकोड नम्बरलाई उल्टोबाट डायल गर्नु पर्ने छ, जस्तै तपाईंको पिनकोड नम्बर १२३४ भए ४३२१ डायल गर्नुहोस र उल्टोबाट पिनकोड नम्बर डायल गरे पनि ATM मेसिनले तपाईंको कार्डको सही कोड नम्बर पहिचान गर्ने छ र पैसा निस्कनेछन तर यसै बेला ATM मेसिन सँगरहेको स्पेसल डिभाइस र तपाईंको मोबाईलको नेट्वोकिङ डिभाइस मिली प्रहरी कन्ट्रोल रुममा आपत्कालिन सूचना प्रदान गर्ने छ र प्रहरीले स्थान को पहिचान गरी तुरुन्त तपाईलाई उद्दार गर्ने छ।
४) यदी तपाईंले कारको चाबी कार भित्रैराखी अचानक ढोका लक गर्न पुगेको खण्डमा र स्पेयर चाबी घर मै भए के गर्नु हुन्छ? एक छीन त आपत नै पर्ला हैन? यदी कारको ढोकामा रिमोट कन्ट्रोल भए नआत्तिनुहोस, मोबाईल द्वारा समाधान लिनुहोस। यस्तो अवस्थामा तपाई आफ्नो कारको ढोका नजिकै उभिनुहोस र घरमा रहेको अन्य सदस्य सँग उहाको मोबाईलमा फोन गर्नुहोस र घरमा रहेको स्पेयर चाबीलाई उस्को मोबाईल नजिकै लगि अनलक वटन दबाउन लगाउनुहोस, त्यसो गरेमा तपाईको कारको ढोका खुल्ने छ, भएन त समाधान!!!
५) यदी तपाईंको मोबाईल सेटको ब्याट्री एकदमै कमजोर वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छ तर सोही समयमा तपाइलाई ईमर्जेन्सी फोन गर्नु पर्‍योभने के गर्नुहुन्छ? यस्तो अवस्थामा मोबाईलको कि प्याडमा *३३७०# डायल गर्नुस्, तपाईंको मोबाईलमा रहेको रीजर्ब ब्याट्री सन्चालन हुने छ, जस बाट तपाईंले आफ्नो खतरा टाल्नु सक्नु हुनेछ।
लेबल: All computer tips
आफ्नो ल्यापटपको battery लामो समय सम्म टिकाउनको लागि केही टिप्स
१) धेरै जसो ल्यापटपहरुमा स्क्रिनको लाईट डिम गर्ने सुबिधा रहेको हुन्छ, यदि तपाईंको ल्यापटपमा यो सुबिधा छ र आफ्नो ल्यापटपको battery लाई लामो समय टिकाउन चाहनु हुन्छ भने स्क्रिनलाई डिम गरेर राख्नुहोस् ।
२) ITunes, डेस्क्टप सर्च जस्ता प्रोग्रामले CPU को लोड बढाउने काम गर्छ जसको कारण battery धेरै खपत हुन्छ त्यसैले यदि तपाईं battery मा काम गर्दै हुनु हुन्छ भने यस्ता प्रोग्रामहरु सके सम्म नचलाउनुहोस् ।
३) USB डिभाइस, WiFi आदीले पनि battery धेरै खपत गरी रहेका हुन्छन त्यसैले यदि यि प्रोग्रामको प्रयोग भई रहेको छैन भने यसलाई हटाएर शटडाउन गरेर राख्ने गर्नुहोस् । यदि तपाईं आईपड लाई ल्यापटपबाट charge गर्दै हुनुहुन्छ भने battery को life प्रभाबित हुन्छ यो कुरा याद राख्नुहोस् ।
४) सि.डि वा डि.भि.डि ल्यापटपमा जब प्रयोग गर्नु हुन्छ तब धेरै power खपत हुने गर्छ । यदि तपाईंले यसको प्रयोग गर्नु भएको छैन तर सि.डि रोम मा सि.डि राखी नै राख्नु भएको छ भने पनि power खपत भई नै रहेको हुन्छ त्यसैले रोम भित्र सि.डि राखीनराख्नुहोस् ।
५) battery को मेटल connect बेला बेलामा सफा गरीरहनु होस् , लगभग १ / १ महिनामा , यसले battery बाट power ट्रान्स्फर रामो सँग हुन्छ ।
६) battery लाई एक पल्ट फुल charge गरीसकेपछि त्यसलाई लामो समय सम्म use नगरिकन छाड्ने नगरनुहोस्, एक पल्ट चार्ज गरी सके पछि कमसेकम हप्तामा १ चोटि भए पनि use गर्ने गर्नुहोस् । त्यस्तै battery लाई लामो समय सम्म discharge पनि छोड्ने नगरनुहोस् ।
७) ल्यापटपलाई स्ट्यान्डबाइ mode मा हैन हाइबर्नेट mode मा राख्ने गर्नुहोस् । ल्यापटपलाई स्ट्यान्डबाइ mode मा राख्दा power त बच्छ तर हाइबर्नेटमा जस्तो बच्दैन ।
८) यदि तपाईं battery बाट ल्यापटपमा काम गर्दै हुनु हुन्छ भने एक पटकमा एउटै मात्र काम गर्ने गर्नुहोस् , तपाईं कुनै काम गर्दै हुनु हुँदैछ त्यही बेला गीत पनि सुन्दै हुनु हुँदैछ र आफ्नो ईमेल पनि चेक गर्दै हुनु हुँदैछ भने यो याद राखुहोस् कि तपाईंले आफ्नो battery लाई ज्यादा भार दिदै हुनु हुँदैछ ।
९) यदि तपाईं ल्यापटपमा game खेल्दै हुनुहुन्छ त्यसमाथी सि.डि रोममा सि.डि राखेर भने तपाईंको battery धेरै बेर सम्म टिक्ने वाला छैन ।
१०) त्यसो त आजकाल नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आउँदै छ त्यस्तै नयाँ नयाँ battery हरु पनि , दिन भरी टिक्ने battery हरु पनि उपलब्ध भईसकेका छन त्यसैले नयाँ ल्यापटप किन्दै हुनु हुन्छ भने यो कुराको पनि याद राख्नुहोस् ।
कम्प्युटर समस्या र समाधान
अब फेरी केही कम्प्युटर सम्बन्धी कुरा गरौ । हाम्रो कम्प्युटरमा प्राय जसो आई पर्ने समस्याहरु बारे केही चर्चा र त्यो समस्याहरु समाधान गर्ने उपाय बारे केही लेखन गई रहेको छु , आशा छ तपाईंहरुलाई यो अबस्य पनि लाभदायक हुनेछ ।
१. Hidden फाइल नदेखिनु
कहिले काँही कुनै Virus वा द्वेषपूर्ण Script हरुको कारण तपाईंले Hidden Mode मा राख्नु भएको फाइल वा फोल्डर तपाईंले पछि " Show Hidden file and folder " ( Tools > Folder Options > View Menu > Hidden files and folders ) गर्दा पनि नदेखिन सक्छ । शायद तपाईंहरुले पनि यो समस्या भोग्नु भएको नै होला ।
यो समस्या समाधान गर्न
१ Start > Run र Regedit टाईप गरेर Enter गर्नुस् ।
२ त्यसपछि यो location सम्म जानुस् HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Explorer\_Advanced\_Folder\_Hidden\_SHOWALL
३ CheckedValue कि मा Double क्लिक गर्नुस्
४ र त्यहाँ Value Data लाई 1 राखिदिनुस् ।
बस तपाईंको काम सकियो ।
२. Drive लाई डबल क्लिक गर्दा New Window मा खोलिनु
कहिले काहिँ तपाईंले कुनै Drive लाई Double क्लिक गरेर खोल्न खोज्दा उक्त Drive त्यही window मा नखुलेर Automatically अर्कै Window मा खोलिन्छ । हामीलाई थाहा छ यो अबस्य पनि राम्रो लक्षण होइन किन भने उक्त Drive normal mode मा same window मा खोलिनु पर्थ्यो । यदी तपाईंले File मेनु को Tools मा गएर Folder Option लाई change गर्नु भएको भए अर्कै कुरा ..
किन Drive नयाँ window मा खोलिन्छ त ? यहाँ अबस्य पनि Virus अथवा अरु कुनै समस्या आएर नै हो
यसलाई समाधान गर्ने तरिका
पहिलो उपाय :१ Start > Run > र यहाँ regsvr32 /i shell32.dll टाईप गर्नुस्
२ ok गर्नुस् ।
३ तपाईंले यो message पाउनु हुन्छ
४ बस तपाईंको समस्या अब समाधान भयो
दोस्रो उपाय :
१ Start > Run > Regedit टाईप गर्नुस् र ओके गर्नुस् ।
२ अब HKEY_CLASSES_ROOT/Directory/Shell मा जानुस्
३ Default key लाई double क्लिक गर्नुस् र त्यहा none टाईप गर्नुस्
४ अब HKEY_CLASSES_ROOT/Drive/Shell मा जानुस्
५ Default key लाई double क्लिक गर्नुस् र त्यहा none टाईप गर्नुस्
६ ok गर्नुस् ।
तेस्रो उपाय :
यदी तपाईं regedit option चलाऊन चाहनु हुन्न भने यो उपाय गर्न सक्नु हुन्छ ।
१ Start > Run > र यो टाईप गर्नुस् reg add hkcr\_drive\_shell /ve /d none /f
आशा छ यि तीन उपाय तपाईंको लागि समाधान हुन सक्छ ।
३. आफ्नो कम्प्युटरलाई Virus हरुबाट Autorun Disable गरेर जोगाउने तरिका
धेरै Virus हरु कम्प्युटरमा सर्ने कारण तपाईंको कम्प्युटरमा कुनै CD वा pendrive राख्ने बित्तिकै Autorun हुनाले हो र यो Autoplay enable window को difault set भएर पनि हो ।
Autorun लाई Disable गर्ने तरिका :
१ Start > Run > regedit टाईप गर्नुस् र ओके
२ अब HKEY_CURRENT_USER\_Software\_ Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_Explorer मा जानुस्
३ NoDriveAutorun मा double क्लिक गर्नुस् र Hexadecimal मा Value "FF" वा Decimal मा Value 255 टाईप गर्नुस् ।
Note: यदी त्यहाँ NoDriveAutorun भन्ने कि छैन भने दाँया तिर right क्लिक गरेर new dword value मा क्लिक गरेर NoDriveAutorun टाईप गरेर Enter गर्नुस्
५ Registry window लाई exit गर्नुस् र कम्प्युटर लाई restart गर्नुस्
यो तरिका बाट तपाईंले Autorun लाई Disable गरेर Virus infected USB pendrive वा CD लाई Autorun हुन बाट रोक्न सक्नु हुन्छ र autorun.inf virus लाई Run हुन बाट जोगाउन सक्नु हुन्छ ।
४. "Show Desktop" Icon लाई कसरी Restore गर्ने ?
कहिले काहीँ गल्तीले तपाईंले "Show Desktop" Icon लाई shift+Delete गर्नु भयो यो सोचेर कि यो मात्र Shortcut हो । तर वास्तवमा त्यो नै orginal icon रहेछ भने के गर्नु हुन्छ ?
ShowDesktop Icon अरु Icon हरु भन्दा फरक हुन्छ र सामान्यतया यो Icon लाई फेरी Restore गर्न सकिदैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंले यो तरिका अपनाउन सक्नु हुन्छ ।
१ Notepad लाई खोल्नुस् र तल लेखिएको code लाई कपि गरेर paste गर्नुस् ।
२ अब फाइलको नाम ShowDesktop.scf राखी यो location मा लगेर save गरिदिनुस् ..
C:\_Document and Settings\_Username\_Application Data\_Microsoft\_Internet Explorer\_Quick Launch
३ कम्प्युटरलाई restart गर्नुस् ।
हामीले कुनै कुनै फिल्ममा एउटै अनुहार भएका दुई व्यक्तीले अभिनय गरेको देख्नपाउदछौ । चलचित्रमा दुइजनाको रुपमा देखाइएतापनि वास्तविकरुपमा अभिनय एकजनालेनै गरेको हुन्छ । यसरी चलचित्रहरुमा एउटै मानिसको दोहोरो भूमिका कसरी देखाइन्छ जानौ ।
डबल पार्ट फिल्म खिच्दा क्यामेरा संचालकले क्यामेराको लेन्सलाई आधा छोपिदिएको हुन्छ । यस्तो गरिदा रिलको आधा एकातिर मात्रै दृश्य भरिन्छ । त्यसपछि अर्को दृश्यमा फिल्म खिच्न रिललाई उल्टोतिर घुमाइन्छ जसलाई रिवर्स गरिनु भनिन्छ । र लेन्सको अर्को आधा भाग छोपि फिल्म खिचिन्छ । यसरी खिचिएको दृश्यहरु कम्प्युटरको सहताले मिलाई हेरिनयोग्य एउटै मानिसको दोहोरो भूमिका भएको चलचित्रको निमार्ण गरिन्छ ।
⁯१. शुरुवातदेखी १४ दिनसम्म - Ovum (अण्ड)
२. १५ दिनदेखी १२/१४ हप्तासम्म - Embryo
३. १२ हप्तदेखी नजन्मिदासम्म - Fetus (भ्रुण)
४. जन्मेदेखी १ महिनासम्म - Newbron (नवजात शिशु)
५. १ महिना देखी १ वर्षसम्म - Infant (शिशु)
६. १ वर्षदेखी ३ वर्षसम्म - Toddler
७. ३ वर्षदेखी ६ वर्षसम्म - Preschoot (Early Childhood)
८. ६ वर्षदेखी ११ वर्षसम्म - Schoolgoing (Middle Childhood)
९. ११ वर्षदेखी १४ वर्षसम्म - Prepubescent (Late Childhood)
१०. १४ वर्षदेखी १६ वर्षसम्म - Pubesent age
११. १६ वर्षदेखी २० वर्षसम्म - Post pubescent age
१२. २० वर्षदेखी ४० वर्षसम्म - Youth (युवक)
१३. ४० वर्षदेखी ६० वर्षसम्म - Post youth (प्रौढ)
१४. ६० वर्ष माथी - Old बृद्ध⁮
ब्लॉगिंग शॉर्टकट सिक्नुहोस ।
की-बोर्डमा काम गर्दा शॉर्टकट कमांड्सको प्रयोग सबैलाई मन पर्छ । ब्लगमा पोस्ट लेख्दा पनि शॉर्टकट कमांड्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सबै साथीहरुलाई यसको जानकारी नहुन सक्छ । थाहा छ केही यस्तै कमांड्सको बारेमा, जुन आफ्नो पोस्ट एडिटरमा काम गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो शॉर्टकट कमांड इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5+/विंडोज र मोज़िला परिवार (1.6+ र फायरफॉक्स 0.9+) सँगै अर्को ब्राउजर्समा पनि काम गर्दछ ।
control +b= बोल्ड
control + i = इटेलिक
control + l = ब्लॉककोट या उद्धरण चिन्ह (त्यसबेला, जब तपाईंले एडिटर एचटीएमएल मोडमा हुनुहुन्छ)
control + z = अनडू
control + y = रीडू
control + shift +a= लिंक
control + shift + p = प्रिव्यू
control +d= ड्राफ्ट के रूप में सेव
control + p = पोस्ट प्रकाशन
control + s = आटोसेव
control + g = इंडिक ट्रांसलिटरेशन (केवल त्यसबेला, जब तपाईंले यो विकल्प रोज्नु हुन्छ)
लेबल: All computer tips, Internet
Post Titles Display in Sidebar
नमुना Post Titles Display in Sidebar
चित्र न १
चित्र न २
फेसबुकबाट आफ्ना सामाग्री कसरी डाउनलोड गर्ने ?
फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई आफूले अपलोड गरेका सामाग्री डाउनलोड गर्ने सुविधा हालै दिएको छ। यसमा तपाईँले गर्नुभएका पोस्टहरु, आफ्नो बारेमा जानकारीहरु, तपाईँले राख्‍नुभएका फोटो र भिडियोहरु पनि समावेश हुन्छन्।
यी सब जानकारी फेसबुकले तपाईँलाई एउटा जिप फाइलमा राखेर डाउनलोडका लागि उपलब्ध गराउँछ।
जो पायो उहीले तपाईँको खाता खोलेको बेला जानकारीहरु डाउनलोड नगरुन् भनेर फेसबुकले सुरक्षा अपनाएको छ। यी जानकारी डाउनलोड गर्न तपाईँसित आफ्नो परिचय भेरिफाइ गर्न लगाइन्छ।
त्यसपछि तपाईँको सामाग्री डाउनलोड गर्न तपाईँको इमेलमा पठाइन्छ।
डाउनलोड गर्न के गर्नुपर्छ त ? सुरुमा फेसबुकको दायाँ छेउमा भएको एकाउन्टमा क्लिक गरी एकाउन्ट सेटिङ्ग्स रोज्नुपर्छ। त्यसपछि खुल्ने पेजको सबैभन्दा मुनि डाउनलोड योर इन्फरमेसनको लिङ्क हुन्छ। त्यसको नजिकै रहेको लर्न मोरमा क्लिक गरेपछि तपाईँले आफ्नो जानकारी डाउनलोड गर्ने प्रक्रिया थाल्न सक्नुहुन्छ।
चोर बाट उम्कने गजबको Idea
साथी कल्पना गर्नुहोस यदि कुनै दिन कुनै चोर वा चोरहरुको समुहनै हजुरको पछि लाग्यो र हजुरको एक्लै भएको अवस्थामा हजुरलाई ATM बाट पैशा निकाल्न लगायो । यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ? यहाँहरु सबैको आ–आफ्नै उत्तर होला तर पैशाको लागि ज्याननै नरहने वा ज्याननै जोखिममा पार्ने कुनै पनि किसमको कार्यलाई उपयुक्त मान्न सकिदैन । यस्तो अवस्थामा बल भन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसको लागि यस्तो अवस्था आइजो परेमा ...
१. कुनै विवाद नगरीकन मैले ATM बाट पैशा निकालेर दिन्छु भन्नुहोस र ATM Booth मा छिर्नुहोस ।
२. आफ्नो कार्ड छिराउनुहोस र आफ्नो.......
. पिन नं. उल्टोमा दबाउनुहोस । यदि हजुरको पिन नं. ५६७८ हो भने ८७६५ दबाउनुहोस ।
३. यस्तो गर्दा पैसा निस्कन्छ तर बिचैमा अड्किन्छ र चोरहरुले थाहा नपाउने गरी सम्बन्धित बैकं वा प्रहरीचौकीमा खबर गरिदिन्छ ।
यो सुविधा आपतकालिन अवस्थाको लागि भनी प्राय सबै देशको प्राय सबै ATM मा हुन्छ ।
कृपया एउटा सभ्य नागरिकको हैसियतले आपतकालिन अवस्थामा मात्र यो उपाय प्रयोग गर्नुहोला ।अन्यथा भवितब्य स्थितिको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति मात्र हुनेछ । यो ब्लग र यसका सदस्यहरुको कुनै जिम्मेवारी रहने छैन ।
गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स
1. AND अथवा +
And अथाव + ले शब्दलाई जोड्ने काम गर्दछ। जसवाट ठ्याक्कै ति दुबै शब्द भएको सर्च रिजल्ट भेटिन्छ ।
2. OR अथवा Space
यसो गर्दा दुईवटा शब्द मध्ये कुनै एक मात्र भए हुन्छ भन्ने वुझीन्छ। enepal media
यस चिन्हको प्रयोग गरेर सर्च गर्दा गुगलले ठ्याक्कै त्यही वाक्य सम्झेर सर्च रिजल्ट खोज्दछ।
“the sun lights up the moon”
यस माईनस चिन्हको यस वाहेक भन्ने वुझाँउछ । उदारणको लागी sun -”moon and stars” भन्दा यसको सर्च रिजल्ट सन आउदाँ मुन र स्टारर्स को कुरा चाँही आउनु हुन्न भन्ने वुझीन्छ।
यस चिन्हलाई गुगल ले वाईल्ड कार्डको रुपमा वुझ्दछ जसले गर्दा कुनै वाक्यको विचमा कुनै शब्द विर्सियो भने गुगले संभावित शब्द चयन गरेर सर्च गर्दछ। “the * lights up the moon”
यसको प्रयोगले गुगलले कुनै शब्दको पर्यावाची शब्द खोजेर देखाई दिन्छ।
दुई अंकको विचमा यसको प्रयोगले ति दुई अंक विचको रेञ्ज भन्ने जनाँउछ। "solar eclipse 1990..2005"
गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स - २
बिदेशी विनिमय दर रुपान्तरणको लागी (currencies)
नाप तौल रुपान्तरणको लागी (weight, length, volume, etc)
100kg in lb
समय थाहा पाउनको लागी (time)
मौसम थाहा पाउनको लागी
गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स - ३
तपाँईलाई स्कुल पढ्दा म्याथमा सरल गरेको याद आउछ? समिकरण लेख्न सक्नु हुन्छ भने त्यो काम गुगलमा लेख्न सकिन्छ।
(10 + 4) /2 *7
प्रतिशत निकाल्नको लागी त गुगललाई कस्ले जित्ने ।
51% of 900
यसलाई पनि ट्राई गर्ने हो कि?
cos(45) tan (45)
4 ! (फ्याक्टोरियल पत्ता लगाउन)
गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स - ४
यसले खोज्नु पर्ने कुरा निश्चित साईमा मात्र खोज्दछ।
inurl: _ intitle: _ intext: _ inanchor:
यसले सम्वन्धित सर्च स्ट्रिङ्गलाई क्रमश URL, title, text अथजम anchor मा मात्र खोज्ने काम गर्दछ। यदि माथिका अपरेटर माथी "all" भन्ने टर्म राखिदिने हो भने एकै पटक सम्वन्धित रिजल्ट देखाँउछ।
intext:bbc.co.uk nepal -king
यसले दिएको URL लाई कहाँ कहाँ लिङ्क गरेको छ त्यो मात्र देखाँउछ।
यसले ईन्टरनेटमा सम्वन्धित शब्दको अर्थ के के दिएको छ त्यो देखाँउछ।
यो चाँही गुगलमा ट्युटोरियल खोज्ने मेरो फेवरेट तरिका हो। यसमा फाईल टाईप जे दिएको छ सम्वन्धित स्ट्रीङ्गको रिजल्छट त्यो टाईपको फाईलमा छ भने मात्र देखाँउछ।
PHP Mysql Tutorial filetype:pdf
गुगललाई के सोध्न मन लागेको छ एक चोटी सोधेर र हेर्नुस गुगलले बुझ्यो भने फेरी सोध्नु पर्दैन।
All computer tips (37)
सामान्य जानकारी (25)
तपाइंलाई चाहिने सामग्री खोज्नुहोस
केही प्रचलीत पोस्टहरु यस प्रकार छ
नयाँ नेपालको नक्सा कोर्दै डा.बाबुराम भट्टराई
डा.बाबुराम भट्टराई : नयाँ नेपालको नक्सा कोर्दै गोरखाको खोप्लाङ गा.वि.स.मा जन्मेको एउटा साधारण गाउँले केटो आज मुलुकको चर्चित राजनीतिज्ञको र...
नुवाकोट दरवारमा भोटेताल्चा र नुवाकोट दरवारपरिसर घुमेर हेर्दा
नुवाकोट दरवारमा भोटेताल्चा विक्रम सम्बत १८१८ मा तेस्रोपटकको प्रयासपछि बल्ल पृथ्वीनारायण शाहको कब्जामा आएको नुवाकोटको ऐतिहासिक...
कम्प्युटर सम्बन्धी केही उपयोगी टिप्स
Scroll Bar को साइज(Width)बढाउने वा घटाऊनलाई १ Desktop मा Right क्लिक गर्नुस् र Properties मा क्लिक गर्नुस् २ Appearance Tab मा क्लिक गर्नुस...
अब फेरी केही कम्प्युटर सम्बन्धी कुरा गरौ । हाम्रो कम्प्युटरमा प्राय जसो आई पर्ने समस्याहरु बारे केही चर्चा र त्यो समस्याहरु समाधान गर्ने उपा...
रोल्पा एक्सप्रेस 'अदालत उही। सिंहदरबार उही। उही बालुवाटार। उही अनुहार भद्रकालीको,' गाडीभित्र र बाहिर झरेका बोलीको भोलुम क्रमशः...
मोबाईल फोन यस्तो साधन हो जस्को प्रयोग दिनानु दिन बददै गई रहेको छ, संचारको एकदमै सुलभ साधन मोबाईल फोन नै हो, यसमा पाइने बिभिन्न सुबिधा भएकै क...
महाकवी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जीवनी (१९०९-१९५९) लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा तिलमाधव देवकोटा र अमरराज्यलक्ष्मी देवकोटाका छ भाइ छोराहरूमध्ये लक्ष्...
नेवारहरु जनजाति हुन कि होइनन् ?
'नेवार Newars' समुदाय साँस्कृतिक रुपले निकै सम्पन्न छ । यो एक अल्पसंख्यक जाति हो । काठमाण्डौं उपत्यका मूलथलो भएका यिनीहरुको जातिगत ध...
तपाईं सँग विन्डोज XP सि.डि छ र आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न चाहनु भएको छ तर तपाईंलाई सि.डि को product key थाहा छैन भने एउटा सजिलो तरिका छ ...
आजसम्म साइट भ्रमण संख्या
ममरे पनि मेरो देश बाचिरहोस
देशले रगत मागे मलाई बलिचडाउनु
हाम्रो ब्लगमा साथी बन्नुहोस